★မြန်မာ့အလင်း★: မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၁)
မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၁)
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အင်မတန်ကိုဆင်းရဲပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ စည်းလုံးမှုကလည်း လုံးဝ ပြိုကွဲနေပါတယ်။ ဒီမိုသမား၊ နအဖ၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ဗမာ , တပ်မတော်သား, KNU, DKBA , KIA ဆိုပြီး တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရန်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့။ စီးပွားရေး နဲ့ နိုင်ငံရေးက စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေနေမှာပါ။ဒါပေမယ့် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံကြီးတွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ မူခင်းတွေဟာ နည်းပါးပြီး ပိုမိုအေးချမ်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? နအဖ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်းလို့လား? မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ လူလူချင်းမေတ္တာထားဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆုံးမချက်တွေကြောင့် အခုလိုအခြေအနေဆိုးကြီးမှာ အဆင်ပြေနေတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတည်မြဲအောင် မွတ်ဆလင်များ၏ ဘေးမှ အသက်စွန့်ကာကွယ် ပေးကြသူတွေကတော့ ရခိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားတွေ အသက်စွန့်ခဲ့ကျလို့ အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံဟာ အေးချမ်းသာယာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအတွက် မြန်မာလူမျိုး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ကျွန်တော်တို့ တောသားနှစ်ယောက်ကနေ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို စော်ကားတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးတယ်ဆိုပြီး ပြောပါလိမ့်မယ်။ အမှန်ကိုပြောလို့ စော်ကားတယ်ထင်ရင် သနားတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကနေ မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီး မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ လုံးဝ ပျောက်သွားဖို့ စည်းရုံး အကြံပြုသွားပါမယ်။ ကျနော်တို့ နည်းလမ်းက သွေးတစ်စက်တောင် မကျစေရဘူး၊ ကုလားတွေအပေါ်မှာလဲ အမုံန်းထားဖို့ မလိုပါဘူး။ တရားဥပဒေဘောင်ထဲက လှုပ်ရှားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအလိုကျ မေတ္တာတရားကိုသာ အခြေခံပြီး လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ ကျနော်တို့ နည်းလမ်းကို အထင်မသေးပါနဲ့။ အင်မတန်ကို အစွမ်းထက်ပါတယ်။ တင်ပြတဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်သလိုမေးခွန်းထုတ်နိုင်တယ်။ ကြိုက်သလို စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ စဉ်းစား.. စဉ်းစား.. လုံးဝ လက်တွေ့ကျပြီး အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ လက်ခံလာပါလိမ့်မယ်။ ဓါးတွေ၊ ထုတ်တွေ၊ သေနတ်တွေ နဲ့ အမုံန်းဆိုတာကြီကို မသုံးပဲ မွတ်ဆလင်ဝါဒ လုံးဝ ပျောက်သွားစေရမယ်။ အာမခံတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေဟာလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးအပါအ၀င် ကုလားတွေပါ မွတ်ဆလင်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ မေတ္တာသည် ကြီးမားဆုံး အစွမ်းပါ။
နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံရေးဝါဒတစ်ခုအကျိုးပဲ ကြည့်တတ်တယ်။ အခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာလည်း ဒီမိုသမားတွေဟာ ပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက်မလုပ်ပဲ နှာစေးနေ၏။ တချို့က ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး စီးပွားရေးတဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘတ်စကားစီး၊ ဈေးဝယ်တာက အစ နိုင်ငံရေးတဲ့။ အခုကြတော့ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပဲ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးဆိုပြီး ပြောဆိုလာကြပါပြီ။ ဒီမိုဝါဒ အကျိုးတခုပဲ မကြည့်ပါနဲ့ ။ ရိုဟင်ဂျာ လူလိမ်တွေ အရေးဟာ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး ရောထွေးနေတဲ့ ကိစ္စကြီးပါ။ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိခိုက်မည့်အရေးပါ။ စီးပွားရေးသက်သက် လို့ပြောရင် အင်မတန်ကို အမြင်ကျဉ်းလွန်းရာ ကျပါတယ်။ ဗဟုသုတနည်းလွန်းသူတွေ ပြောတဲ့ စကားပါ။ ဒီတော့ ဆက်လက်ပြောချင်တာက . . . .
ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၅၀၀ တုံးက လွတ်လပ်စွာ ဘာသာအယူဝါဒတွေကို ဝေဖန်ခွင့် ရခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတွေ မြင်ရပါတယ်။ အယူဝါဒမတူတဲ့သူတွေ ငြင်းခုံးမှုတွေ လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုဆွေးနွေးမှုကြောင့် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်တာမရှိခဲ့ဘူး။ ဘာသာရေးဝေဖန်လို့ သေဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အခုခေတ်ကြီးဟာ ပိုမိုပွင့်လင်းလာတယ်ဆိုပြီး ဘာသာရေးကိုတော့ မဝေဖန်သင့်ဘူးလို့ ယူဆနေသူတွေဟာ မှန်ကန်ရဲ့လား?။
မွတ်ဆလင်ဘာသာဆိုတာ အယူဝါဒတစ်ခုပါ။ ဒီမိုကရေစီ၊ ဆိုရှယ်လစ် တို့လိုမျိုးပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီဝါဒကို အပြစ်တင်ခွင့်ရှိတယ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ကို ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘာကြောင့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ဝေဖန်ခွင့်မပေးရမှာလဲ? နိုင်ငံရေးစံနစ်နဲ့ ဘာသာရေးဝါဒ မတူဘူးလို့တော့ ဆင်ခြေပေးလို့မရဘူးဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဘာသာရေးဆိုတာ ဟိုးတချိန်တုံးက နိုင်ငံရေးစံနစ်တစ်ခုပါပဲ။ အခုလက်ရှိမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ Quran ကျမ်းကို အခြေခံဥပဒေဖြစ် သုံးနေတာဟာ ဘာသာရေးသက်သက်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးစံနစ် ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက မွတ်ဆလင်ဝါဒကိုဝေဖန်ခွင့်…
မုဒိမ်းကောင်၊ ကြာကူလီ၊ ကလေးငယ်နဲ့ လိမ်ဆက်ဆံတဲ့ကောင်၊ ဓါးပြ ၊ လူသတ်သမားတွေကို ပြစ်တင်ရှုပ်ချရင် လက်ခံကြပါတယ်။ မိုဟာမက်ဟာ မုဒိမ်းကောင်၊ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိုဟာမက်ကိုတော့ ဝေဖန်လို့ မရဘူးလား? အဖြေရှိလား? မုဒိမ်းကောင်ခြင်းအတူတူပဲ မိုဟာမက်လဲ အပြစ်တင်ရမှာပေါ့။ သဘာဝ မကျဘူးလား? မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ဝေဖန်ခွင့်လုံးဝရှိပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ မခံနိုင်တာကတော့ သူတို့စိတ်ဓါတ် မရင့်ကျက်မှုကြောင့်ပါ ။ အဲဒါကို သူတို့ပြုပြင်ရပါမယ်။ အများအကျိုးအတွက် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ တရားဥပဒေအတွင်းကနေ အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ အမြစ်ကနေ မြေလှန်ပြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
မွတ်ဆလင်ဆိုရင် တရုပ်၊ အဖြူ ၊ အမဲ၊ကုလား . . . ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သတိထားဆက်ဆံပါ။ ကိုယ်ပေါင်း စိတ်ခွာလုပ်ပါ။ ခင်ဗျားနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့မိသားစုကို မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့အတွက် ခေါင်းဖြတ်၊ လက်ဖြတ်ပြီး သတ်သင့်တယ်လို့ လက်ခံထားသူတွေပါ။ သူတို့က သတ်ဖြတ်မှု မလုပ်နိုင်ရင်တောင် အကောက်ကြံနိုင်ပါတယ်။ (အဲလို အကောက်ကြံလို့လဲ မွတ်ဆလင်ဝါဒရ ငရဲမကြီးပါဘူး) နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ယုတ်မာမှုကိုလည်း အပြုံးတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုလူမျိုးကို သတိမထားသင့်ဘူးလား?
နောက်တစ်ခု မှားနေတာကတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အူကြောင်ကြောင် အတွေးအခေါ်ပါ။ ဘာသာတိုင်းမှာ လူဆိုးလူကောင်းရှိတာပါပဲ။ ဘာသာနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဟုတ်ပြီ . . . .ဒီကိစ္စ အများကြီးဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ် . . . .
မိုဟာမက်ဟာ အပေါက်ဆိုရင် ကြွက်တွင်းတောင် ချမ်းသာမပေးဘူးဆိုတဲ့ လူမျိုး။ သူယူတဲ့မိန်းမတွေက ၆နှစ်ရွယ်မိန်းခလေး (၉နှစ်အရွယ်မှ စပြီး လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုပေမယ့် မိုဟာမက် ရင်ခုံလို့ အိမ်ခေါ်ခဲ့တာ သူလေး ၆ နှစ်အရွယ်ကပေါ့။ ငယ်ချစ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပြောတာ)၊ သူ့သားရဲ့မိန်းမ ၊ သူ့အဒေါ် ၊ သူများမိန်းမ၊ မုဆိုးမကြီး၊ အပျို၊ ကျွန်မ အစုံပါပဲ။ အသက်ကြီးသူကို မရိုသေပဲ ကျေးဇူးကန်သူဖြစ်တယ်။ သူ့ကို တမန်တော်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုလို့ မွေးစားဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဦးလေးကို လပေါင်းများစွာ ဆဲခဲ့ပါတယ်။ မိုဟာမက်မှာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ထားဆိုလို့ ဘာမှကို မရှိပါဘူး။ သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်း မနည်းလှပါဘူး။ ရန်သူဖြစ်တဲ့ ဂျူးတွေ၊ မိတ်ဆွှေ ဖြစ်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း အပါအ၀င် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေကို စော်ကားတဲ့သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mecca ဟာ တခြားဘာသာတွေရဲ့ နတ်စင်ကြီးတစ်ခုပါ။ အဲဒါကို သူက သိမ်းပိုက်ပြီး နတ်ရုပ်တွေဖျက်ပြီး သူတို့ ဘာသာရေးနေရာအဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ မိုဟာမက်လောက် တခြားဘာသာကို စော်ကားတဲ့သူ တခါမှမကြားဖူးပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ပါ.. မိုဟာမက် ကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေဟာ မိုဟာမက်လုပ်သမျှ အတုခိုးမှာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်လဲ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအားလုံး အေးချမ်းမှုဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တိုးတက်ပါတယ်ပြောတဲ့ မလေးရှားကိုပဲ ဥပမာကြည့်ပါ။ ဓါးပြတိုက်မှု တွေနဲ့ ဖေါက်ထွင်း လုယက်မှုတွေ များပြားပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲလိုမျိုးဘာကြောင့် မဖြစ်တာလဲ?
မွတ်ဆလင်တွေဟာ မိသားစုအချင်းချင်း ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်း (သတင်း)၊ ဖခင်နှင့် ညီအစ်ကိုများက သူတို့ သမီးနှင့် ညီအစ်မများကို မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း (သတင်း၁ ) (သတင်း၂ )၊ အမျိုးသမီးများအပေါ် မတရားဖိနှိပ်ခြင်း (သတင်း)၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဇတ်အင်္ဂါကို ဖျက်ဆီးခြင်း(သတင်း)၊ မုဒိမ်းစုပေါင်းကျင့်ခြင်း (သတင်း )၊ ဘာသာခြားနိုင်ငံများမှဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်ဖို့အားပေးခြင်း(သတင်း)၊ တခြားဘာသာများ၏ အဆောက်အဦးများနှင့် အထိမ်းအမှတ်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း (ဗီဒီယို ၁) (ဗီဒီယို ၂ ) စတဲ့ လူမဆန်တဲ့ အပြုအမှုမျိုးတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေက ဘာသာတိုင်းမှာ လူဆိုး လူကောင်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကာကွယ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ လုံးဝမခိုင်လုံပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေ သတ်မှတ်တဲ့ လူဆိုးဆိုတာ ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ လုံးဝ မတူပါဘူး။ သူတို့က မွတ်ဆလင်မဟုတ်ရင် လူဆိုးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ မုဒိမ်းကောင်၊ လူသတ်သမားတွေကိုတော့ လူဆိုးလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ အဲလိုပြောလို့ မယုံဘူးမဟုတ်လား? ဒါဆိုရင် မုဒိမ်းနဲ့ လူသတ်သမား မိုဟာမက်ကို သူတော်ကောင်းလုပ်ထားတာပဲ ဥပမာကြည့်ပါ။
ကမ္ဘာမှာ မွတ်ဆလင်တွေက ဦးနောက်မရှိသူတွေဆိုပြီး ဂုဏ်သတင်းပြန့်လွင့်နေပါတယ်။ အဲလိုပြောတဲ့သူတွေကို အပြစ်မတင်ထိုက်ပါဘူး။ တခါတုံးက စင်ကာပူမှာ အဖေဖြစ်သူက သူ့ရဲ့သမီးတွေကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဆိုသလို နှစ်နဲ့ချီပြီး မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်။ အဲလို မတရားလုပ်နိုင်အောင် ကူညီတဲ့သူက ဘယ်သူလဲသိလား? အဲဒီကောင်မလေးတွေရဲ့ အမေအရင်းတွေတဲ့ဗျာ။ အဲလောက်အထိ မိခင်စိတ်ကင်းပြီး ကြောင်တောင်တောင်နိုင်တဲ့ မွတ်ဆလင် မိခင်တွေပါ၊ အဲဒီသမီးလေးတွေခမျာ သူတို့အမေနဲ့ အဖေကို မုဒိမ်းသမားတွေအဖြစ် လူတွေရှေ့မှာ တရားရင်ဆိုင်ရမှာ ဘယ်လောက်ရှက်မလဲ? မွတ်ဆလင်မိဘတွေက အရှက်လဲမရှိ ဦးနောက်လဲမရှိလို့ အဲလိုအလုပ်မျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေမှာ အဲလို စိတ်တူကိုယ်တူ ယုတ်မာတဲ့ မိဘမျိုးရှိနိုင်လား? လုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းက သိပါတယ်။ အဖေဆိုးရင် မိခင်ကတော့ သူသမီးတွေကို အသက်ပေးကာကွယ်မှာပါ။ ဒါဆိုရင် ဘာသာရေးက အရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ထင်မြင်ချက်မှန်ကန်ပါသလား?
မွတ်ဆလင်တွေ အရှက်နဲ့ လူစိတ်ကင်းမဲပုံဆက်တင်ပြရမယ်ဆိုရင် ။ gang-rape လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ကို စုပြီး မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ကိစ္စကို ပြောချင်ပါတယ်။ တခြားဘာသာဝင်တွေဟာ စိတ်မထိမ်းနိုင်လို့ မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းက ပဲ လုပ်ကြတာပါ။ တခြားလူတွေသိရင် မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ မကူညီတဲ့အပြင် ၀ိုင်းရိုက်ပြစ်မှာ မဟုတ်လား? မွတ်ဆလင်တွေကတော့ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ ကူညီကြပါတယ်။ (သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် မိုဟာမက်ဟာ မုဒိမ်းကောင်ပဲ သူတို့လုပ်တာ စမ်းသလား?) ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုလားတစ်သိုက် ကျနော်တို့ မြန်မာမလေးကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တာ မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကုလား-မြန်မာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား? အဲဒီတုံးက ဒီမိုမီဒီယာတွေဟာ နအဖကို အပြစ်တင်တယ်… မြန်မာတွေကိုလည်း တဖက်လှည့်အပြစ်တင်ပါတယ်။ ကုလားတွေကို အပြစ်တင်တယ်လို့ မကြားမိပါဘူး။ တကယ်တမ်းတရားခံဟာ ဘယ်သူလဲ? gang-rape ဆိုတာ မွတ်ဆလင်တွေပဲ လုပ်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်လား? ဘာဖြစ်လို့ ဒီမိုမီဒီယာတွေက တဖက်သတ် သတင်းထုတ်လွှင့်တာလဲ? တခြားနိုင်ငံတွေမှာမှလဲ ကုလားတွေက အဲလို လုပ်ပါတယ်။ Pakistan , Saudi , Norway , အမေ၇ိကန် , Australia မှာလည်း ကုလားတွေက စုပြီး အားနွဲ့တဲ့ မိန်းခလေးကို မုဒိမ်းဝိုင်းကျင့်တာ အလေ့အထ လိုဖြစ်နေပါတယ်။ Quran ကျမ်းသင်ကြားမှုတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ၊ မိုဟာမက်အပြုအမူမှတမ်းတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အဲဒါတွေဟာ အခုလိုမျိုး ယုတ်ညံ့မှုတွေလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုတာ တွေ့လာပါမယ်။ ဒီလို ယုတ်မာမှုတွေရဲ့ မြစ်ဖျားဟာ မွတ်ဆလင်ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြောနေတဲ့ ဘာသာရေးဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူးဆိုတာ လက်တွေ့ကျသလား? ဘာသာတိုင်းဟာ ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမတယ်ဆိုတာ မှန်သလား? နောက်ပြီး မနေ့တနေ့က သတင်းထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေ ကျနော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို သတ်သွားတယ်ဆိုပဲ။ (သတင်း) ဒါဟာ ကျုပ်တို့ မြေပေါ်မှာ စော်ကားခံရတာပဲ…
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စလည်း ဆက်ပြောချင်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာအစိုးရက နှိပ်စက်လို့ ထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကိုသိအောင် ဒီမိုမီဒီယာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်မီဒီယာတွေကို အားကိုးပြီး လိမ်ညာခဲ့ပါတယ်။ သတင်းတွေက ကုလားတွေ ပါးစပ်က ပြောတာ ကို အမှန်လို့ တရားသေမှတ်ပြီး အဲဒီအတိုင်းပဲ ပြောကြပါတယ်။ တကယ်အနှိပ်စက်ခံရသလား? နောက်ပြီးအရေးကြီးတာ ဒီကုလားတွေဟာ မြန်မာပြည်က တကယ်ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာ တွေးခေါ်စဉ်းစားပြီး အမှန်ကိုရှာမှ ဖြစ်ပါမယ်။
အဲဒီကုလားတွေဟာ မြန်မာပြည်ကလုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကုလားတွေပါ။ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း ရေးသားချက်မှာ လူ ၃၀၀ - ၄၀၀ လောက်မှာ အားလုံးနီးပါးက မှတ်ပုံတင်မပါဘူးတဲ့။ အကြောင်းက အစိုးရက ထုတ်မပေးလို့ဆိုပဲ။ ဒါတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လူအားလုံးမှာ မှတ်ပုံတင်မရှိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသုံးရာကျော်မှာ တစ်ယောက်မှာပဲ မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့မကျဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ မှတ်ပုံတင်မရှိရင် ခရီးလုံးဝ သွားလို့မရလို့ လူတိုင်းမှတ်ပုံတင်ကိုတော့ ရအောင် လုပ်ထားတာချည်းပါ။ နောက်ပြီး မြန်မာဝန်ထမ်းတွေကို ပိုက်ဆံပေးရင် မှတ်ပုံတင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူသုံးလေးရာမှာ တစ်ယောက်လောက်ပဲ မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကိုကြည့်ရင် ကုလားတွေဟာ မြန်မာပြည်က မဟုတ်ပဲ လူလိမ်စစ်စစ်တွေဆိုတာ လုံးဝသေခြာပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ နှိပ်စက်ခံရတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒုက္ခသည်မှန်ရင် မိသားစုအလိုက်ပဲ ထွက်ပြေးပါတယ်။ ဥပမာ ကရင်တွေ၊ ဗီယက်နမ်တွေကြည့်ပါ။ ကုလားတွေက လူငယ် ယောကျားလေးတွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်မှကို မပါဘူး။ ဘယ်ဒုက္ခသည်များ ယောကျားလေးတွေချည်းပဲ ထွက်ပြေားတာ မြင်ဖူးလဲ? နောက်ပြီး တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူက ရေလမ်းအရှည်ကြီးကို ခက်ခက်ခဲခဲ သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ နီးနီးနားနားမှာ ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ထွက်ပြေးမှာ သေခြာပါတယ်။ အမှန်တကယ် စစ်တပ်က နှိပ်စက်တယ်ဆိုရင် လှေတွေလို့ မြုပ်ပြစ်မှာ စိုးရိမ်ကြမှာပေါ့။ ရေလမ်းက ရာသီဥတုကြမ်းပြီး အဝေးကြီးသွားရပြီး အသက်အန္တရယ်များပါတယ်။ နယ်ချင်းစပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို သွားရင် ပိုပြီးအဆင်မပြေဘူးလား? ဒါကိုကြည့်ရင် အဲဒီကုလားတွေဟာ ဒုက္ခသည်လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီလူတွေ အဲလောက်စွန့်စားပြီးသွားတာ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုပြီး တွေးရကျပ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုဝင်ဖို့ အသက်စွန့် ကြိုးစားချက်ဟာ သိပ်ပြီး မထူးဆန်းပါဘူး။ သဘောင်္ container မှာ ၀င်ပြီး တရုပ်တွေ ၊ မြန်မာတွေ စွန့်စားသွားလာတာနဲ့ ယှဉ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကုလားတွေ အခွင့်အလမ်းတွေကိုမျှော်ကိုးပြီး လုပ်နေတာ သိသာပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာအခွင့်အလမ်းလဲ? အခွင့်အလမ်းကတော့ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်က အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကို ချေခြခွင့်ရအောင်လို့ပါ။ တကယ်လို့ မရဘူးဆိုရင် ဒုတိယကတော့ မြန်မာပြည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေနိုင်ဖို့ပါ။ ဒီမှာ သတိထားဖို့က နေရာပြန်ချပေးတယ်ဆိုတာ မြေကြီးကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး သွားနေကြလို့ပြောလို့မရဘူး။ သူတို့နေထိုင်ဖို့၊ လုပ်ကိုင်ဖို့ပါ အစိုးရနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက တာဝန်ယူရတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအပါဝင် NGO တွေက အိမ်တွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ ထောက်ပံ့ပါတယ်။ ကုလားကြောက် နအဖကလဲ ထောက်ပံ့မှာပါ။ (နအဖ ကုလားကြောက်တာ နောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်မှာ ပလီက ကျက်သရေမရှိတဲ့ အသံထုတ်ခွင့်ပေးတာ နအဖ စောက်ကြောက်မိုလို့ပေါ့ဗျာ။ အခုလည်း ကုလားတွေကို ရခိုင်မှာ မြေငှားပြီး နေထိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတယ် မဟုတ်လား?) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဆိုတော့ ဟိုမှာက နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းဘူးလေ။ ကုလားတွေက ခွေးသားဖေါက်သလို မွေးထားတော့ လူတွေအဆမတန်များပြီး ဆင်းရဲနေတယ် မဟုတ်လား? ရခိုင်က လုပ်ကိုင်လို့ကောင်းတယ်။ အိမ်၊ မြေမရှိတဲ့ သူတွေ အိမ်တွေ မြေတွေ အလကားရနိုင်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်လိုနေရတဲ့ ကုလားတွေ ရခိုင်မှာ မြေနဲ့ အိမ်ရဖို့ လိမ်တာ ဆန်းသလား? သိသိကြီးနဲ့ အလိမ်ခံရတာ နာတယ်ဗျာ။
လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ဒီမိုမီဒီယာတွေကတော့ ကုလားဘက်ကနေ ရပ်ပေးကြတယ်။ သူတို့ကိုလဲ အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။ သူတို့ကိုပိုက်ဆံ ပေးတဲ့အနောက်ဖက်အစိုးရတွေ အလိုကျလုပ်ပေးရတာပဲ။ နအဖ ကလည်း သေနတ်ကြီး ခါးမှာ ချိတ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာလူလိမ်တွေကို အပြစ်မတင်ပဲ ဦးနုတို့ကိုပဲ အပြစ်တင်တဲ့ ဆောင်းပါး ပိတောက်မြေမှာ ရေးတင်ခဲ့တာ သတိထားမိကြမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ အချင်းချင်းပဲ သတ္တိုရှိတဲ့ အိမ်ကျယ်တွေမဟုတ်လား?
ုထိုင်းကလည်း သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ကုလားတွေကို မြန်မာပြည်ကို ပို့မယ်ဆိုပြီး ပြောနေပါတယ်။ နအဖက ရိုဟင်ဂျာသတင်းကို အမှောင်ချထားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံရင် ကျနော်တို့ သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ နအဖဆိုတာ သူတို့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ပဲ ကြည့်ပြီး လက်ခံကောင်းလက်ခံနိုင်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကဆိုတာ ပြောပြီးပါပြီ။ လူလိမ်တွေဆိုတာလဲ သက်သေပေးပြီးပါပြီ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေးပါ ဖျက်ဆီးမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဆောင်းပါးမှာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ပုံ.. ဘာသာရေးစည်းရုံးပုံ အကြောင်းနဲ့ သူတို့ကို အကြမ်းမဖက်ပဲ ဘယ်လို လက်တွေ့ကျကျ မြန်မာ့မြေပေါ်က ပြောက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ တင်ပြပါမယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေ စစ်သား၊ ဒီမို၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကချင်လို့ တံဆိပ်တွေ တပ်ပြီး အချင်းချင်း အတင်းပြောရင်း အိမ်ကျယ်တွေ ဆက်လုပ်နေကြဦးမလား? ခရစ်ယာန်တွေကလဲ မွတ်ဆလင်တွေက GOD ကိုးကွယ်တာပဲဆိုပြီး သဘောထားကြီးဖို့မစဉ်းစားနဲ့။ မကြာခင်က အင်ဒိုနီးရှားမှာ ခရစ်ယာန်တွေ ရွာလုံးကျွတ် အသတ်ခံရတဲ့ အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါ။မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီး မြန်မာပြည်ရောက်လာရင် သားစဉ်မြေးဆက် ဒုက္ခရောက်မယ်နော်။ အဖေက သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ် မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားရေးအတွက် စည်းလုံးကြပါ။ အချင်းချင်း အမုံန်းတွေ အဃာတတွေ မထားပါနဲ့တော့။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးတဲ့ အဖိုးကြီးတွေ လိမ္မာကြပါ။ စစ်တပ်ကို မျက်ကန်းယုံကြည်ပြီး ဒီမိုကိုမုံန်းအောင်လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့တော့။ ထို့အတူပဲ အနောက်ဖက်ကို အထင်ကြီးပြီး နအဖကို မုံန်းအောင်လုပ်တဲ့ ဒီမိုအဖိုးကြီးတွေလဲ အကျင့်ဆိုးတွေ ဖျောက်ပါတော့။ မိမိလူကို ဂုဏ်တင်ပြီး တဖက်ကို စောက်တင်းပြောရင်း ပါးစပ်အရသာ ခံနေတာ တိုင်းပြည်အရမ်းကို နစ်နာပါတယ်။ လူငယ်တွေကို သွေးကွဲအောင် လုပ်မယ့်အစား စည်းလုံးအောင် ဆုံးမပေးကြပါ။ မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီးဘေးမှ ကင်းလွတ်ပါစေ
(ဗီဒီယိုလင့်တွေနဲ့ ဆောင်းပါးလင့်တချို့ဟာ ကို NWO နဲ့ ကို u တို့ပေးဆီပုံးမှာ ရေးထားတာကို ယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:06 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါပဲဗျာ...အထောက်အထားအတိအကျနဲ့ရေးနိုင်တာကို ပိုလေးစားတယ်ဗျာ...နောက်ထပ်လည်း ဒီလိုပို့စ်မျိုး များများရေးပါအုံး...
မွတ်စ်တွေရဲ့ မြန်မာပြည်အား အကောက်ကြံကြီးကြီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေပါ...
တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာ...မြန်မာတွေကို alarm ပေးဖို့ အရမ်းကိုလိုအပ်နေပါပြီ...အင်တာနက်မသုံးနိုင်တဲ့လူတွေပါသိဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...
ကောင်းတယ်ဟေ့ ဇော်မျိုးရေ မကောင်းတုန်းကငါမင်းကိုဆဲတယ် အခုဟာက အမှန်မို့ ချီးကျူးတယ်ကွာ ဒီမိုမီဒီယာတွေက စစ်အိုးရမကောင်းကြောင်းဘဲ ရှာပြောနေတယ် တကယ်တန်းရိုဟင်ဂျာတွေသနားရင် ချင်းမိုင်ခေါ်ထားပေါ့ ဟားဟား mizzima က မွတ်စလင်ကုလားစိုးမြင့် အုပ်စည်းနေတာ အစ်နေ့ စမိုင်လုပ်နည်းတောင် ဖော်ပြဖူးတဲ့ ကုလားမီဒီယာ
ကြောင့်လူကိုလူလို့သာမြင်ပါကိုတောသား။မီဒီယာတိုင်းလဲမှန်မယ်မထင်ပါနဲ့။အစ်စလမ်တိုင်းလဲယုတ်မာသူမဟုတ်သလို၊ဗုဒ်ဒဘာသာတိုင်းလဲသူတော်စင်မဟုတ်ပါ၊အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဗုဒ်ဒဘာသာတိုင်းလဲယုတ်မာသူမဟုတ်သလို၊အစ်စလမ်တိုင်းလဲသူတော်စင်မဟုတ်ပါ၊ကိုတောသားကအမြင်ကျဉ်းလွန်းလို့ရှင်းပြနေရတာပါ။နောက်ပြီးရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာတောင်ဘာသာမတူသူအချင်းချင်းလက်ထက်ကျသေးတာပဲရခိုင်ဟာဘင်ဂလားဒေ့နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အပြင်ဘာသာအယူဝါဒလဲတူတာမို့လက်ထက်ထိမ်းမြားခြင်းအမှုကရှိမှာမလွဲမသွေပဲလေ၊ဆိုလိုချင်တာကအိမ်ထောင်တခုပြုပြီးနောက်ရခိုင်ကလူကဘင်ဂလားဒေ့မှာအခြေခြတာရှိနိုင်သလိုဘင်ဂလားကလဲရခိုင်မှာအခြေခြခြနိုင်ပါတယ်၊ကိုတောသားကဒီလိုလူမျိုးရေးရောပြွန်းမှုကိုစစ်ထုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုစစ်ထုပ်တဲ့ဇကာမပေါ်သေးဘူးလို့ပဲပြောပရစေ။မြန်မာလူမျိုးအတော်များများဟာကဘာတဝှန်းမှာအခြေခြနေပါပြီ၊ဒါကိုကိုတောသားလိုက်လံတားဆီးဖို့စဉ်းစားဖူးပါသလား၊ကျုပ်တော့မထင်ပေါင်။ကိုတော့လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်၊ယူချင်ရာယူမယ်၊နေချင်ရာနေမယ်၊သူများတော့အမြင်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့အရောင်အသွေးမတူ၊ဘာသာမတူတဲ့မြန်မာပြည်ကဘာသာခြားတွေကိုနှိပ်ကွပ်ချင်နေတာဟာသိပ်ကိုရုပ်ညံ့လွန်းပါတယ်။စစ်အစိုးရမကောင်းလို့ပြည်သူတွေခါးစည်းခံနေရချိန်မှာရိုဟင်ဂျာဟာလဲလူသားပါပဲလားဆိုတဲ့အမြင်လေးထားပေးပါ။ဪငါသာရခိုင်မှာလူဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေးကြည့်ပါ။ကိုတောသားကမြန်မာပြည်ကခရစ်ယန်နဲ့မူစလင်နဲ့ကိုလဲမသိမသာသွေးထိုးပေးထားတယ်နော်။အင်ဒိုနီးရှားမှာ ခရစ်ယာန်တွေ ရွာလုံးကျွတ်အသတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတောသားကပြောတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလဲချေပချက်နဲနဲပေးမယ်နော်၊ဂျူးနဲ့ခရစ်ယန်ကမူစလင်ကိုမျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားချင်ကြိုးစားမယ်၊ဒါမှမဟုတ်အစ်စလမ်ကသူတို့ကိုရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ချင်ရှို့မယ်။အေးချမ်းစွာလမ်းလျှောက်တ့ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ဘယ်ဘာသာဝင်အုပ်စုကမှကို့ဘာသာဝင်အချင်းချင်းရိုက်နှက်ဝင့်အောင်မရိုင်းစိုင်းဘူး။ကိုတောသားကချေပကောင်းချေပနိုင်ပါတယ်၊ဘာသာဝင်အစစ်အမှန်ကဘုန်းကြီးကိုမရိုက်ဘူးဆိုပြီး၊ကျုပ်ကလဲအမြင်ကျဉ်းသူမဟုတ်တဲ့အတွက်လက်ခံပြီးသားပါ။ကိုတောသားလက်ခံဖို့လိုတကဘယ်မူစလင်အစစ်အမှန်မှကို့သမီးကိုစော်ကားတဲ့အမှုမပြုပါဘူးဆိုတာပါပဲ၊အစ်စလမ်ကလဲမပြထားပါဘူး။ဘာသာ၁ခုကိုအပေါ်ယံမသုံးသပ်ပါနှင့်၊ဘာသာကိုကိုးကွယ်သူများ၏စာရိတ်တအပေါ်မူတည်ပြီးမဆုံးဖြတ်ပါနှင့်၊ကျုပ်ကိုတောသားဘလော့မှာလာမိုက်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုတောသားရဲ့တဖက်သက်စော်ကားတာကိုပဲဖြေရှင်းခြင်းပါ။ကျုပ်ကဒီလိုပြန်ချေပရတာကိုတောသားတို့ကိုအားနာလှပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုတောသားတို့ကအကောင်းဖက်ကနေပြီးဘလော့ကိုရေးခဲ့တာမဟုတ်လို့ကျုပ်ကလဲဖြေ
ရှင်းခြင်းပါ။စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိသောဗုဒ်ဒဘာသာဝင်များကိုအထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်။"Mecca ဟာ တခြားဘာသာတွေရဲ့ နတ်စင်ကြီးတစ်ခုပါ။ အဲဒါကို သူက သိမ်းပိုက်ပြီး နတ်ရုပ်တွေဖျက်ပြီး သူတို့ ဘာသာရေးနေရာအဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ မိုဟာမက်လောက် တခြားဘာသာကို စော်ကားတဲ့သူ တခါမှမကြားဖူးပါဘူး"လို့ကိုတောသားကစွတ်စွဲထားပါတယ်။ဂျူး၊ခရစ်ယန်နဲ့မူစလင်မပေါ်ခင်တမန်တော်အစ်ဘရာဟင်လက်ထက်ထဲကထာဝရဘရားကိုလက်ခံသောကြောင့်နတ်ရုပ်တွေကဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရတာပါ၊အစ်စလမ်ဟာသတ်သတ်ထိုးထွက်လာတဲ့ဘာသာမဟုတ်ပါ။ကိုတောသားမလေ့လာပဲစော်ကားရပြီးရောသဘောမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
ကောအပြစ်၁ခုလားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုရမ်ထဲမှာအတိအကျပါပါတယ်၊အစ်စလမ်အကြောင်းသိချင်ရင်မုဟမဒ်နဲ့ကိုရမ်ကိုလေ့လာယုံနဲ့မရပါ၊အဆက်ဆက်ကဘာသာများကိုလဲလေ့လာဖို့တိုက်တွန်းပရစေ။အစ်စလမ်ဟာဘာသာအသစ်မဟုတ်ပါ။refineလုပ်ထားတဲ့မှန်ကန်သောဘာသာသာသနာသာဖြစ်ပါသည်ကိုတောသားကိုပြောမဲ့သာပြောရတယ်။ဘာသာရေးကိုနားမလည်၊သမိုင်းကြောင်းလဲမသိ၊လူမျိုးစုရောထွေးမှုကိုလဲရေရေရာရာမသိ၊ကိုထင်ရာကိုရေးဖင်ပိတ်ငြင်းမဲ့အစားထဲကမို့ကျွဲနားမှာစောင်းတီးတာတောင်အသုံးဝင်ချင်ဝင်မှာမို့သာဓကတွေ၊ဥပမာတွေနဲ့ရှင်းလဲလက်ညောင်းယုံသာရှိပြီးအကျိုးရှိမှာမဟုတ်သောကြောင့်ဂဃနဏရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။ကိုတိုင်လေ့လာပြီးသိရတာပိုအသုံးဝင်ပါတယ်လေ့လာကြည့်ပါ။လေ့လာပြီးလို့ဝေဖန်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲကိုတောသားအရင်လုပ်ရမှာကမှန်ထဲမှာကို့မျက်ချေးကိုအရင်ရှင်းပါ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောချင်တာကကိုတောသားကို့မျက်ချီးသာကိုရှင်းလို့ရချင်ရမယ်။သမိုင်းကိုတော့ဖျောက်ဖျက်လို့မရပါဘူး။ဘာသာရေးဆိုတာသိပ်ကိုနက်နဲလွန်းပါတယ်။ကိုတောသားဝေဖန်လို့လဲအစ်စလမ်အမြစ်မပြုတ်သွားပါဘူး၊ကျုပ်တို့ကတော့ရှင်းရှင်းပဲ၊သူများဘာသာတရားကိုဒီလိုစော်ကားတဲ့ကိုတောသားတို့ကိုအထင်ကိုမကြီးဘူး၊ကိုတောသားတို့ကိုအရှက်မရှိတဲ့ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးတိုက်စစ်စင်နေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်၊မြန်မာပြည်မှာယခင်ထဲကenglsihအမွေပေးခဲ့တဲ့ Divide and rule(သွေးခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်)ကိုနေဝင်းအစိုးရလက်ထက်ထဲကကျင့်သုံးလာတာပါ။မြန်မာကရင်နှင့်ခရစ်ယန်ကရင်ကိုသွေးခွဲခြင်း၊မြန်မာကချင်ကိုခရစ်ယန်ကချင်နှင့်သွေးခွဲချင်း၊မြန်မာရခိုင်နှင့်မူစလင်ရခိုင်ကိုသွေးခွဲချင်းများကိုအစဉ်အဆက်ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ကိုတောသားတို့လိုလက်ကိုင်တုတ်တွေကဘလော့ရေးပြီးတိုက်စစ်စင်တာကိုကျုပ်တို့ကသနားတယ်လို့။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုအချိန်မှာအမြင်ကျယ်နေ
အစ်မတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ မိုဟာမက်က သူ့သားမိန်းမကိုယူတယ်၊ သူ့အဒေါ်ကိုလဲ မိန်းမ လုပ်တယ်၊ သူများမိန်းမကိုလဲ မုဒိမ်းကျင့်တယ်၊ မုဆိုးမကြီးကိုလည်း ငွေအတွက် လိမ်ညာချစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအလုပ်ဟာ လူမပြောနဲ့ လမ်းဘေးက ခွေးတွေတောင် မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒီအလုပ်တွေကို လုပ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ကျနော်တို့က ထောက်ပြတာ ကျနော်တို့ကို ရိုင်းစိုင်းတယ်? ဒါဆိုရင် မွတ်ဆလင်ခင်ဗျားက အဲလောက်ယုတ်ညံ့တဲ့ မိုဟာမက်ကို ကိုးကွယ်တဲ့ အစ်မက ကျနော်တို့ကို အမြင်ကျဉ်းတယ်? ဟားဟား… ဖြစ်ရမယ်.. ဖြစ်ရမယ် မွတ်ဆလင်မမရေ
ကျနော်တို့က ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ကို အရင်တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက အရင်တိုက်ခိုက်တာပါ။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။ မိုဟာမက်တပည့်တွေပဲ စခဲ့တာ မဟုတ်လား? အစ်မရဲ့ သီအိုရီအရ မိုဟာမက် တခြားဘာသာတွေရဲ့ ရုပ်တုတွေ ဖျက်ဆီးတာ မှန်တဲ့သဘောပဲ။ ဒါဆိုရင် ဘာအတွက် ကျနော်တို့ မြန်မာ့မြေပေါ်မျာ မွတ်ဆလင်ဘာသာ အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ကိစ္စကန့်ကွက်နေသေးလဲ? မိုဟာမက်လို့ အကြမ်းဖက်ဖို့လဲ မစဉ်းစားပါဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာကနေ သူတို့ဖာသာ ထွက်ဖို့ ရည်၇ွယ်ထားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးတယ်.. လူစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် အစ်မလဲ မွတ်ဆလင်ဘာသာကနေ ထွက်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါလာလိမ့်မယ်။ အစ်မလည်း ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာကို တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ကူညီဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာဟာ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်တောင် မခံဘူး… ပြောရဲပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို အစ်မတို့ မွတ်ဆလင်ယောကျားတွေကို ဖျားယောင်းလိမ်ညာပြီး မွတ်ဆလင်ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာတွေ အမှတ်ရပါ။ အဲဒီကောင်တွေ အဲလိုလုပ်တာကို ပလီကနေ ဆုချီးမြှင့်တာဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ထင်ပါသလား? လူယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်ပါ။ ယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ (မွတ်ဆလင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှန်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိပါ့မလားလို့လည်း သံသယရှိပါတယ်)
အစ်မတို့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ အချက်အခြာကျတဲ့နေရာတွေမှာ သေခြာတည်ထောင်ထားပါတယ်။ အံတု စိန်ခေါ်တဲ့သဘောပါ့။ ရန်ဆောင်တဲ့ လက္ခဏာပါ။ တစ်ဖက် ဒေါသကို စွပေးနေတာမှန်ကန်ပါသလား?
အစ်မက မွတ်ဆလင်ဘာအတွက်လုပ်နေတာလဲ? မိုဟာမက်လိုကောင်မှာ ဘာများ ရိုသေထိုက်တာ ရှိလဲ? သူ့သားမိန်းမ၊ သူ့အဒေါ်၊ သူများမိန်းမ၊ ၆ နှစ်ခလေး၊ မုဆိုးမ ဘယ်သူများ ကျန်သေးလဲ? အဲလို တဏှာရူး တစ်ယောက်ကို အစ်မက ဘာအတွက် အရိုအသေပေးနေတာလဲ? အစ်မတို့ မိန်းခလေး မထိခိုက်ဘူးလား? ထိခိုက်လဲ သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. .. ရမ်ဘိုရုပ်ရှင်ထဲက မုဒိမ်းကျင့်တာကို အခြေခံပြီး အတည်ပြောနေတာကိုး… အေးလေ.. စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ရင် ဘာမှန်းမသိပဲ mecca က လေးထောင့်တုံးကြီး ကန်တော့နေမှာမှ မဟုတ်တာ။
မွတ်ဆလင်ကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ အမြစ်ဖြုတ်မည့်
ဇော်မျိုး (မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားသည်)
ကိုတောသားရေ မုဟမဒ်မှာသားမရှိပါ။ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကတိမ်းပါးခဲ့ပါသည်။လေ့လာချင်ရင်www.panet.com.mm မှာသွားဖတ်ပါ။ကျုပ်ထက်ဘာသာရေးကိုနားလည်တဲ့သူများကဆွေးနွေးထားပါတယ်။နောက်ပြီးအစ်စလမ်
သားသိစေရန် လူသားသည်တစ်၊နိုင်ငံသားသည်နှစ်၊ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသည်သုံး ဒီထုံးကိုနှလုံးမူရင် ကိုတောသားဖြစ်နေတဲ့ တမန်တော်မုဟမဒ်နဲ့အစ်စလမ်ဘာသာပေါ်မှာထားနေတဲ့မနာလိုစိတ်တွေပျောက်ပြီးထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေ(ဂင်ဂါဝါလုသဲစုမျှမကရှိတဲ့လူသားဘုရား)တွေပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုရရှိခံစားရမှာပါ။နောက်ဆုံးပြောချင်တာကကျုပ်ကကိုတောသားတို့လိုကိုသန်းရွှေကပြည်သူဆီကခိုးပြီးအပိုင်စီးထားတဲ့ငွေနဲ့အချောင်ပညာလာသင်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုမဖြုန်းချင်ပါ ကိုတောသား (သို့မဟုတ်) mr racist ရှင့်..... ငြိမ်းချမ်းစွာလူသတ်ပညာသင်ကြားနိုင်ပါစေ
P.S i don't have any intention to insult the good-hearted soldier from Russia.
ခင်ဗျားတို့ကို အမြစ်ဖြုတ်မယ်လို့ မပြောပါဘူး။ ခင်ဗျားက မွတ်ဆလင်ဝါဒနဲ့ ကုလားကို မခွဲခြားတတ်သေးဘူး ။ လူမျိုးနဲ့ ၀ါဒဆိုတာ အတူတူမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကုလားကို မဆန့်ကျင်ဘူး.. ကုလားကို မသတ်ဘူး.. ကုလားကို အကြမ်းမဖက်ဘူး.. ရှင်းတယ်နော်.. လုပ်မှာက အင်မတန်ကို ယုတ်ညံ့လွန်းတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီးကိုပဲ တိုက်မှာ.. အင်မတန်ကို ယုတ်ညံ့လွန်းတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီးကိုပဲ အမြစ်ဖြုတ်မှာ .. ရှင်းပြီလား?
ခင်ဗျား အဖွားဟာ ပလီတွေရဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ဗျူဟာကျော့ကွင်းထဲကို ရောက်သွားတယ်ထင်ပါ့။ ခင်ဗျားတို့ ပလီတွေက ခွေးကုလားတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး မြန်မာမတွေကို ဖျက်ဆီးခိုင်းတယ် မဟုတ်လား? ဘာလဲ မဟုတ်ပါဘူးရှင်လို့ လိမ်မလို့လား? မပူနဲ့ ရှေ့အပတ် ဆောင်းပါးထဲမှာ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို သက်သေနဲ့ ပြမှာ … ကျနော်တို့ တောသားနှစ်ယောက်က အထောက်အထား မရှိပဲ ပါးစပ်ပုံပြင်နဲ့ မရေးဘူး။
မိုဟာမက် သားကိစ္စကိုပြောချင်ပါတယ် မိုဟာမက်ဟာ မုဒိမ်းကောင်ပါ။ အကျင့်သီလမရှိသူပါ။ တဏှာရူးတစ်ယောက်ပါ။ ကြာကူလီကြီးပါ။ အဲလို လူမျိုးဟာ ဘုန်းကံနိမ့်လွန်းအားကြီးပါတယ်။ သားယောကျားလေး လုံးဝ မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အဲဒါကို ကလေးကအစ သိပါတယ်။
ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ အဲလိုဘုံန်းမရှိ ကံမရှိ ယုတ်နိမ့်တဲ့ မိုဟာမက် မိန်းမပေါင်းများစွာ ယူခဲ့ပေမယ့်… သားယောကျား မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သားတစ်ယောက်ကို မွေးစားခဲ့ပါတယ်။Zaid လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိန်းမ Zaynab ကို ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုယူခဲ့တဲ့အတွက် အာရပ်တွေက အပြစ်တင်တာလည်းခံရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ချွေးမကို သမီးအရင်းလို့ သတ်မှတ်တဲ့ အာရပ်တွေရဲ့ အမြင်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်မအနေနဲ့ မွတ်ဆလင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ zakir naik တို့လို အထောက်အထားမရှိပဲ ပါးစပ်က ရူးကြောင်ကြောင်ပြောတာကို နားဝင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Quran ကျမ်းတောင် ဖတ်ဖူးတယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓကို သမန်တော်ဆိုပြီးပြောနေတာ.. ဟားဟား.. ဒီမယ်.. မြန်မာပြည်မှာ မွေးပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာလည်း လေ့လာကြည့်ဦး.. ဗုဒ္ဓက ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ပြောတာ အကြိမ်မနည်းဘူး။ zakir naik လို မျက်နှာက ဆိတ်ပုံစံနဲ့ သူပြောတိုင်းမယုံနဲ့ဗျ။ သူဗုဒ္ဓအကြောင်းပြောတာတွေ တလွဲတွေချည်းပဲ။ ဗုဒ္ဓမှာနောက်လိုက် တစ်ရာပဲရှိတယ်ဆိုပဲ. . . ဒါလဲ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေက ယုံကြတာပဲ
ဒါ့ကြောင့်လဲ ယုတ်ညံ့တဲ့ မိုဟာမက်ကို ကိုးကွယ်တာတွေ.. mecca က အမဲတုံးကြီးထဲမှာ ဘာရှိမှန်းမသိပဲ ကန်တော့တာတွေ.. ကျောက်တုံးမဲမဲ ကြီးကိုလည်း ဘာမသိ ညာမသိလိုက်နမ်း.. မခက်ဘူးလား? စိတ်တော့ မဆိုးနဲ့ .. ကမ္ဘာကြီးက ပြားနေတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ လုံးနေတာ.. mecca က အမဲတုံးက မြန်မာပြည်ရဲ့ ခြေအောက်မှာ ပေါ့ဗျာ။ အနောက်ဖက်မှာကို ဦးတည် မကန်တော့နဲ့ဗျ။ ကန်တော့ရင် အောက်ဖက်ကို ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြီး ကန်တော့ =P အဲဒါမှ အမဲတုံးကြီးကို ဦးတည်မှာ… ကဲကဲ.. စိတ်မဆိုးနဲ့ဦး.. စကားပြောရင် ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောတတ်တယ်.. မွတ်ဆလင်တွေဆိုလဲ ရွံတယ်..
ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို မနွေးနွေးအောင်နဲ့အတူ လက်တွဲပြီး မြေလှန်ပြစ်မည့်
ဟေ့ကေါင် တောသား ကုလားတွေ ကုလားတွေ ဆိုပြီး သိပ်ပြီး မပြောနဲ့ ...... မင်းတို့ ဘုရားလဲ ကုလား ပဲ ... မင်းတို့ ဘုရားရဲ့ နဖူးကို ပြန် ကြည့်ကြည့် အုံး ........ပြီးတော့ မင်းတို့ ဘုရားက ဘယ် နိုင်ငံက လာတာလဲ ဆိုတာ ပြန်မေးကြည့်အုံး .......
သူများ ဘာသာ ကို ဝေဖန်ချင်ရင် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ ကို တန်ဘိုး ရှိအောင် တန်ဘိုး ထားတတ်အောင် အရင် လုပ်ကွ .....
..... ဘုန်းကြီး တွေကို သေနတ် နဲ့ ပြစ် တုတ်နဲ့ ရိုက် နေတာ ဘယ် ဘာသာဝင် တွေလဲ ...?
..... ဘုန်းကြီး တွေကို စစ်ဖိနပ် နဲ့ ကန်နေတာ ဘယ် ဘာသာဝင် တွေလဲ ...?
..... ဘုန်းကြီး တွေကို ထောင်ချ နေတာ ဘယ် ဘာသာဝင် တွေလဲ ...?
..... ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေကို ချိတ်ပိတ် ခိုင်းနေတာ ဘယ် ဘာသာဝင် တွေလဲ ...?
...... နောက်တခုက ...
...... ဘုန်းကြီး တွေ အရက် ဆိုင် ရောက် နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ့ ..?
...... ဘုန်းကြီး တွေ အလောင်းကစားဝိုင်း ရောက် နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ့ ..?
...... ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ လူလစ်ရင် လစ်သလို မကောင်းတဲ့ ဗီဒီယို ကားတွေ ထိုင်ကြည့်နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ့ ..?
...... ဒါတွေကို အရင် ပြုပြင် ပေးလိုက်ပါ .....
... မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအားလုံး အေးချမ်းမှုဆိုတာ မရှိပါဘူး.. ဘေးဆိုးတွေ ကျရောက် တယ်လို့ ပြောတယ် .. ok
.... မင်းအမေလင် နာဂစ်မုန်တိုင်း က ဘယ်နိုင်ငံ မှာ လာဖြစ်တာလဲ ...?
.... ဓါးပြတိုက်မှု တွေနဲ့ ဖေါက်ထွင်း လုယက်မှုတွေ မဖြစ်ဘူးလို့ မင်းကို ဘယ် ခွေးသတောင်းစား က ပြောလဲ....?
.... ကိုကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာက စုတ်ပြတ်သပ် နေတာတောင် သူများ ဘာသာကို ဝေဖန်ချင်နေသေးတယ် ..
..... တောသား နောက်ကနေ လိုက်ပြီး ထောက်ခံ နေတဲ့ ကောင်တွေက ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမှ မရှိတာ။ ခွေးနောက်ကလိုက်ရင် ခွေးလိုက် ပဲဖြစ်မှာကွ ။
..... မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်အားလုံး မုဒိမ်းကောင် တွေကြီးပဲ ဆိုရင် မင်းအမေတောင် ကျန်မှာမဟုတ်ဘူး။
..... မင်းတို့ က မွတ်စလင်အားလုံး မုဒိမ်းကောင် တွေကြီးပဲ လို့ပြောနေတော့ တခုပဲရှိတယ် မင်းတို့ အမေ ကို မုဒိမ်းကျင့်သွားလို့ နေမှာပေါ့။
......လွတ်လပ်စွာ အမြင်ကွဲလွဲခွင့် ရှိပါသည်။ ပေါ့ပါး၊ ရင့်ကျက်၊ တည်ငြိမ်သည့် အသွင်ဆောင်သော မည်သည့် ဝေဖန်၊ ဆွေးနွေးမှုမျိုးမဆို ခွင့်ပြုပါသည်။ .....
ကျနော် မြန်မာ Forum တချို့မှာ Islam ဘာသာခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘာသာရေးကို စော်ကားလိုတဲ့စိတ်နဲ့ တမင်ရေးကြတဲ့ တော့ပစ်တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်။
တော်တော်များများကဘာသာရေးကို စပြီးတိုက်ခိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ကတော့ လူမျိုးရေးကနေစတယ်လို့ကျနော်ထင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် မူဆလင်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ လူအများစုက ဗမာလူမျိုးနဲ့ လူမျိုးမတူတဲ့ အိန္ဒိယ ပါကိစ္စတန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစရှိတဲ့ အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံနွယ် မြန်မာလူမျိုးတွေများတယ် .. ဆလုံလူမျိုး ပန်းသေး အစရှိတဲ့ လူမျိုးသိပ်မကွဲတဲ့ Islam ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကိုတော့ အဲလောက်ကြီး မတိုက်ခိုက်တိုက်ကြပါဘူး။ အဲတာကလည်း လူမျိုးခွဲခြားတာကတော့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေလည်း ခံရတဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ အဲလိုဖြစ်အောင်လည်း နိုင်ငံတော် အစိုးရကိုယ်တိုင်က လုပ်ထားတာတွေ ထောက်ပြလို့ရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြောရင်တော့ နိုင်ငံရေးဖက်ရောက်သွားမယ် ... တော့ပစ်ပဲဆက်တော့မယ်။
မြန်မာ Forum တွေမှာ Islam ဘာသာကိုစတိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးစတာကတော့ သူတို့ဘာသာရေးက လူသတ်တယ်တဲ့ .... အဲတာကိုကျနော့် အမြင်နည်းနည်းပြောချင်တယ်။ Islam ဘာသာဝင်တိုင်းနည်းနည်းက အခြားဘာသာတွေထက် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းကြတယ်။ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြရင် အသုံးပြုနိုင်ရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ လက်နက်မရှိပါဘူး အဲတာကြောင့်လည်း လူတွေကို ဘာသာရေးနဲ့ ဆွယ်ပြီး လူသတ်လက်နက်အဖြင့် အသုံးပြုကြတာပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေ လိုလူသူလက်နက် အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အားနည်းတဲ့ Islam ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ အရှေ့ အလည်ပိုင်း နိုင်ငံတွေကို နိုင်ငံရေးအရ ကြိုက်သလိုခြယ်လှယ်ချင်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ သယံဇာတတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်ကြတယ် .. ဘယ်လိုပဲအကြောင်းပြချက်တွေပေးပေး ဒါကကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်ရက်ပါ။ ဒါကိုမခံနိုင်တဲ့ အားနည်းတဲ့လူစုအနေနဲ့ ဘာသာရေးကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုကြတာကို မှားတယ်လို့ပြောရင် အနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေကိုလည်း အမှားလို့ပြောသင့်တယ်လို့ကျနော်မြင်တယ်။ ပြီးရင် အရှေ့အလည်ပိုင်း အာရပ်တွေ အီရန် သူငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့လူတိုင်းသိကြမှာပါ .. သူတို့တွေရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ထားကလည်း ခေါင်းမာသလောက် စိတ်ရင်းကအရောင်ဆိုးရတာ သိပ်လွယ်တယ်။ ကောက်ကျစ်တာတွေသိပ်မရှိဘူး။ အဲလိုပြောလို့လူတိုင်းအဲလိုမဟုတ်ဘူး သူတို့လည်းကောင်းတဲ့လူရှိသလို ဆိုးတဲ့လူရှိတာပဲ.. ဒါကတော့လူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ပြောပြီဆိုရင် လည်လှီးသားမှစားတယ် ရက်စက်တယ်တဲ့ .. ရှင်းရှင်းပြောရရင် အဲလိုလုပ်တယ်ဆိုတာ သားကောင်ကို ချက်ချင်းသေပြီး ဝေဒနာမခံအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ သားကောင်ကို မညင်းဆဲရဘူး။ တရုတ်လိုနိုင်ငံမှာ ခွေးတွေကို အသားကြေသွားအောင်ရိုက်နှက်ပြီးမှ သတ်တာထက်စာရင် ကျနော် လည်လှီးထားတဲ့ အသားကိုပဲပိုစားချင်တယ် .. ရှင်းရှင်းပြောတာ.
ပြီးတော့ဝက်သားမစားတာကိုလှောင်ချင်ကြတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အမဲသားမစားတဲ့လူတွေ သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့လူတွေရှိတာပဲ။ သူတို့ဟာသူတို့ သူတို့ ယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်တာ ဘာများ အပြစ်မြင်စရာ ဟားတိုက်စရာရှိလဲကျနော်တော့ မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ ပူတဲ့ရာသီတွေမှာ ဝက်သားမစားတာ ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ထမင်းစားတဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်.. အဲတာတော့ ဆက်မပြောတော့ဘူး ..
နောက်အရေပြားလှီးတဲ့ကိစ္စရှိသေးတယ် .. ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ Islam လူမျိုးတွေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်ကနေ ကျန်းမာရေးအတွတ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တာ အခု ၂၁ ရာစုကျမှ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာရှင်တွေကတောင် ထောက်ခံလာရတယ်ဆိုတာ မကြားဖူးကြလို့ဖြစ်မှာပါ။ အရေပြားလှီးထားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် HIV ပိုး လိင်ဆက်ဆံရာကနေကူးဖို့ ရာခိုင်နှုံးမရှိသလောက်ကိုနည်းတယ်။
ကျန်တာကတော့ စော်ကားချင်လို့ သက်သက်မဲ့ အကြောင်းရှာပြီးပြောကြတာများတယ် .. အဲလိုလူတွေကိုတော့ ရှင်းပြလို့လဲမရဘူး ဘေးမဲ့ပေးရမယ်။
လူဆိုတာက ကိုယ်နဲ့ မတူတာ၊ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်မကြိုက်တာကို ဒီ့ပြင်လူက ကြိုက်နေတာကို နားလည်လက်ခံပေးနိုင်ဖို့က သာမန်အားဖြင့်တော့ ခက်ခဲလေ့ရှိတော့ `ဟာ၊ ငါတို့ဘာသာမှာကျတော့ ဒါမျိုး မရှိဘူး၊ သူတို့ဘာသာမှာကျတော့ ဒါတွေက ဘာလို့ ရှိနေရတာလဲ၊ ဒါတော့ မှန်တယ်၊ ဒါတော့ မှားတယ်၊ ဒီတော့ သူတို့ဘာသာက အဲလိုကြီးလား´ အစသဖြင့်ပေါ့ ကိုယ်နဲ့မတူတာကို Negative ဘက်ကနေ စဉ်းစားမိတာတွေ ရှိတတ်တော့ အဲဒီမှာတင် အငြင်းအခုန်တွေ ရှိလာတော့တာပါပဲ။
အားနည်းချက်ကိုသာ ထောက်ပြကြစတမ်းဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘာသာမှာမဆို ထောက်ပြချင်စရာ အချက်တွေ မနည်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ Positive အမြင်ကနေ ချဉ်းကပ်ကြည့်ရင် ပိုမကောင်းပေဘူးလား…။ သတ္တ၀ါတွေကို သတ်တာဖြတ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ဘာသာရေးအရ ဆိုထားပေမယ့် လက်ရှိ လူတွေ ရှင်သန်နေထိုင်ကြတဲ့ လူနေမှုပုံစံအရ အသားဟာ လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်နေတာကို ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ ရမယ်မထင်ဘူး။ ဒီတော့ `ဟာ…၊ ဟိုမှာကြည့်စမ်း နွားသတ်တယ်ဟ၊´ ဆိုပြီး မိမိလိုချင်တဲ့ ရှုထောင့်ကို ဘာသာရေးဘက်နဲ့ နွယ်ပြီး ဆွဲယူ ထောက်ပြကြစတမ်းဆိုရင် အဲဒီကမှ တဆင့် တခြားသော အကြောင်းအရာတွေ အကုန်လုံးကိုပါ မီးခိုးကြွက်လျှောက် ဆက်စပ်ကုန်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ ဘာသာရေးမတူညီမှု အရ မိတ်ပျက်လာစရာ ရှိတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့ တခြားသောဘာသာအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ဘာသာ အကြောင်းကိုပဲ ဆွေးနွေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးကတော့ အရပ်ထဲမှာ ပြောနေတဲ့စကားတွေကို အခြေခံ ဆွေးနွေးတာထက် တိကျသေချာတဲ့ အထောက်အထား အခိုင်အလုံကို အခြေခံ ဆွေးနွေးတာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ အဲဒါတောင်မှ ကျမ်းကိုးကြီး တကိုင်ကိုင်နဲ့ Negative အမြင်ကိုချည်း ဦးတည်ဆွေးနွေးနေပြန်ရင်လဲ အလုပ် မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။
အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ Positive အမြင်ကနေ ပိုပြီး ချဉ်းကပ်ကြည့်ကြတာ ပိုကောင်းမလားလို့ ထင်မိတာပါ ခင်ဗျာ။
ဥပမာ မွတ်စလင်တွေ သူတို့ ရိုးရာအရ ဘာသာရေးပွဲတော် လုပ်ကြတယ် ဆိုပါတော့…။ အဲဒီမှာ သူတို့ လှူကြတန်းကြတာကို ကျနော်တို့ မုဒိတာ ၀င်ပွားပေးရင် ပိုမကောင်းပေဘူးလား။ ဘယ်ဘာသာဝင်ကပဲ လှူလှူ၊ လူတယောက်ကလှူလို့ လူတယောက်မှာ စားစရာ ရသွားတယ်ဆိုတာက ကောင်းတဲ့ အချက်ပဲ မဟုတ်ပေဘူးလား။ Negative အမြင်နဲ့သာ ပြောကြစတမ်းဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အလှူလုပ်တဲ့အခါမှာ စတေးခံရတဲ့ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အသက်တွေကိုလဲ ထောက်ပြလို့ ကောင်းမှကောင်းပေါ့…။
ကုလားတွေမင်းဘလော့မှာသောင်းကျန်းနေပါလား အခွင့်အရေးသိပ်မပေးနဲ့ ဇော်မျိုးရေး အစ္စရေးဘယ်လိုလုပ်လဲတွေ့တယ်မဟုတ်လား ကုလားတွေ အဖေခေါ်ပြီးဝပ်ဆင်းနေတာဘဲ သခင်ယေရှုရဲ့ တပည့်မိုဟာမက် မိုးဇက် တပည့်မိုဟာမက် မိုဟာမက်ဟာ သမ္မာကျမ်းဟောင်း နဲ့ ကျမ်းသစ် ကို ပုံတူကူးခိုးချတဲ့ သူခိုးဘဲ
ဘုရား တွေမင်းဘလော့မှာ သောင်းကျန်းနေပါလား
...... ဝေဖန်လို့ ရတယ် မစော်ကားပါနဲ့ ။
...... တောသား အင်တာနက် သုံးရင် ဒီအတိုင်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
...... ကောက်ရိုးပုံ သွားစောင့် နေရင် တောသား တန်ဖိုး ရှိအုံးမယ်။
...... တောသား ( ဘေးမဲ့လွတ်ပေးခြင်း ခံထားရသူ )။
...... တောသား တိုင်းမဟုတ်ပါ။
ကျုပ်အဖွားကမောင်မင်းကြီးသားပြောသလိုပလီတွေရဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ဗျူဟာထဲရောက်တယ် ဟုတ်စ။ ပြောလိုက်ချင်သေးတယ် အလုပ်များတဲ့ကြားကပြောလိုက်ပရစေ ကျုပ်အဖွားကဖြူးမြို့ကသူကြီးသမီးပါ သူ့အဖေသူကြီးကိုယ်တိုင်ကကျုပ်အဖိုးနဲ့ပေးစားတာ( အဖွားကလူကိုသာယူတာစိတ်ကတော့ဗုဒ်ဒဘာသာပဲ ) ရှင်းပလား ဪတစ်ခါထဲပြောလိုက်ပရစေ ယုံချင်မှယုံနော်
zarni.kr နဲ့ နွေးနွေးအောင်
မင်းတို့ကောင်တွေ အကြံက ဒါအကုန်ပဲလား? ကော်မန့်ရေးရင် ရိုးရိုးသားသားရေး.. ဟုတ်ပလား? မင်းတို့မွတ်ဆလင်တွေ အဲလို စောက်အဆင့်မရှိလို့ သူ့သားမိန်းမကိုလိုးထားတဲ့ မိုဟာမက်ကို ကိုးကွယ်နေတာ။ ဟေ့ကောင် zarni.kr မင်းနဲ့ hypnosis နဲ့ တစ်ယောက်တည်းပဲ.. လာပြီးခွေးကျင့် ခွေးကြံလုပ်မနေနဲ့။ မင်းက hypnosis စကားကြမ်းကြမ်းပြောတယ်။ zarni.kr နဲ့ ချိုချိုသာသာပြောတယ်။ လာပြီးအခြောက်လိုလို အပျော့မဆွဲနဲ့။ ဟိုနွေးနွေးအောင် စောက်ပတ်ဓါးလှီး မွတ်ဆလင်မ.. နင်က tayza နာမည်နဲ့ စောက်ပတ် ရွလို့ ပြောင်းရေးတာလား? အေး.. ငါအနေနဲ့ မိန်းခလေးကို မဆဲသင့်ဘူးသိတယ်။နင်က စောက်အဆင့်ကိုက နိမ့်လွန်းလို့။ နင်ကိုယ်တိုင်က ပလီက ပိုက်ဆံပေးပြီး မြန်မာမတွေကို ဖျက်ဆီးတာ ထောက်ခံနေတဲ့အထိ ကိုယ်ချင်းစားစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်။ နင့်မှာစောက်ပတ်ပါတာပဲ ရှိတယ်။ မိန်းမရောဟုတ်ရဲ့လား? နင့်ကို ငါတို့က ချစ်တယ် လိမ်ညာပြီးတော့ စောက်ပတ်လိုးပြီး မယားငယ်လုပ်မယ်။ အဲဒါကို ငါတို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆုပေးမယ်ဆိုရင် နင်ကျေနပ်မလား? စောက်ကောင်မ မိန်းမချင်းကိုယ်ချင်းမစာနာဘူး။ နင် tayza နာမည်နဲ့ ပြောင်းပြီး လူလိမ်မလုပ်နဲ့။
မွတ်ဆလိမ်တွေ စောက်ဆင့်မရှိဘူး။ နင်တို့ ၂ ကောင်စလုံး မဟုတ်ဘူး ငြင်းချင်ငြင်းလေ ငါ့မှာ သက်သေရှိတယ်။ အေး.. မင်းတို့ကောင်တွေ စကားပြောရင်.. ရိုးရိုးသားသားပြော.. ကနေဒါမှာ လူမျိုးစုံနဲ့ နေနေတာ.. ငအ မဟုတ်ဘူး
မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ အပြုတ်တိုက်သွားမည့်
Zaw myo ကတော့ရမ်းနေပြီဟေ့သတိထားခွေးရူးကိုက်ရင်ခွေးကောင်းကိုက်တာထက်ဆိုးတယ်
Zaw myo နောက်မှာအမှန်တ၇ားလက်ခံကိုးကွယ်တဲ.၇ခိုင်လူမျိုး ၁၀၀ ၇ာခိုင်နှုံး၇ှိတယ်။ဒီကုလားတွေcomments တွေကိုပြန်ေ၇းမနေနဲ.။အချိန်ကုန်တယ်။ မှုစလင်ဝါဒမြန်မာ.မြေပေါ်ကသာမကဒီလောကကြီးကပါပျောက်ကွယ်သွား၇စေမယ်။
..... ခွေးဟောင်တိုင်း လူလှည့်မကြည့်ဘူးကွ.။
..... မင်းက ထိတော့ နာတတ် သားပဲကွ.။
..... မင်းတို့ ဘာသာက သူများကို မကောင်းပြောဘို့နဲ့ ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်း ပြောဘို့ သင်ပေးထားတယ်ထင်တယ်.။
..... ငါတို့ ဘာသာက မြင့်မြတ်တော့ မင်းက စိတ်ဝင်တစား လေ့လာထားတာ မဆန်းပါဘူး.။
..... ဒါပေမဲ့ ငါကတော့မင်းတို့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ဘာသာကို စိတ်မဝင်စားဘူး..
..... မှတ်ချက် ...
မိန်းမနဲ့ အပြိုင် ရန်ဖြစ်တဲ့ ခွေးသတောင်းစားက အခြောက် ဖြစ်တာ သေချာတတယ်.။
..... မင်းတို့ အမျိုးက ဖင်ခံတဲ့ အမျိုးပဲ..မဆန်းပါဘူး ..
..... ဟုတ်ရင် ငြိမ်ခံ ထိရင်နာ ... ok
hey kaung dog taw thar,minnamay ,minaphay, minn buddah ka de lo thin htar pay lar?,ngar ka dawt buddah ko lay sar tae. bar lo lae so ngar kyar bu dar buddah yae lan sin ka thu ta bar ko saw kar dar ma shi lo bae.min lo thay thane dae chee brain nae de blog ko tin pe dot islam ko phout lo ya mae so yin min ko tha narrrrrrrr dae dog taw tharrrrrrr.
...........leeeeeeeeeeeee baeeeeeeeee dog tawwww tharrrrrrrrrr.........................
''I AM GENERAL THAN SHWE 420 ,
MYANMAR SAR MA TAT LO BAR'' HE HE
MIN DOE BLOG KO ENGLISH LO CHANGE LIT BAR LAR, WORLD KA POE BE THI DAR POT, SIN SAR NAW MIN DOE KO POE PE AUNG MYIN SAY CHIN LO ''HAE HAE''
ဇော်မျိုးရေ ခွေးဟောင်တိုင်းထမကြည့်နဲ့ မွတ်ဆလင် ခွေးတွေ ဟောင်လှချည်းလား
ရှီယိုက်တွေဆွန်နီတွေနဲ့ ခွဲထွက်တာ မိုဟာမက် ခွေးမဆက်ပက်လျက်လို့တဲ့ ရှီယိုက်ခေါင်းဆောင် အလီက သူ့တပည့်တွေကိုပြောတယ် မိုဟာမက်က ဖင်ခံ မှ လီးတောင်တာတဲ့
စောပတ်ကို ဓါးလှီးထားလို့ မိန်းမပျက်ဖြစ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင် နွေးနွေးအောင်။ နင်ဟာလေ ဓါးလှီးမပီပီ စောက်အဆင့်က လုံးဝကို မရှိဘူး။ နင်ငါ့ကို ID အသစ်တွေလုပ်၊ ယောကျားနာမည်နဲ့ ငါ့ကို မဆဲနဲ့။ သီဟဆိုတာ နင်မဟုတ်ဘူး ငြင်းချင်လား? ဓါးလှီးမ.. ပြောစမ်းပါဦး
နင်ငါ့ကို အိုင်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့သုံးတာ ငါသက်သေပြမယ်။ နင့်စောက်ပတ်လုံအောင် ထုတ်ထား။ ဓါးလှီးမ lovely, ဓါးလှီးမ nway2aung, ဓါးလှီးမ tayza, ဓါးလှီးမ sweet တို့ဟာ တစ်ယောက်ထဲ ဆိုတာ ငါပြောမယ်။ ငါပြောနေတုံး နင့်အဖေက နင့်ကို မုဒိမ်းကျင့်သလို လူကြားမကောင်းအောင် မအော်နဲ့။ ဟုတ်ပလား?
ဒီမယ် နင့်အိုင်ဒီတွေ အမျိုးမျိုးသုံးပေမယ့် လုံးဝ တူနေတာ နှစ်ခုရှိတယ်။ ဓါးလှီးမရေ နင်မြန်မာစာရိုက်တာ space လုံးဝ မသုံးဘူး။ အားလုံးက ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်။ ဘာလဲ? space မပုတ်တာ ဘာဖြစ်လဲ ပြောမလို့လား? စောက်ပတ်ဓါးလှီးမ. . . ဒီမယ် တခြား ဘလော့တွေမှာ ကော်မန့်ရေးတာ ကြည့်ပါ။ space မထည့်ပဲ ရိုက်တဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားတယ်။ နင်တစ်ကောင်ပဲရှိတယ်။ နောက်ပြီး တေဇဆိုတဲ့နာမည်မှာ “ဗုဒ်ဒဘာသာ” ဆိုတဲ့စာလုံးပေါင်းမှားတာ သွားတူနေတယ်။ ဓါးလှီးမရေ နင်ဘာငြင်းချင်သေးလဲ? နင့်အဖေ နင့်ကို မုဒိမ်းကျင့်ရင် ငါ့ကိုပြောစမ်းပါ။ ဆောင်းပါးရေးချင်လို့ ။ နင့်နာမည် lovely တွေ sweet တွေလုပ်မနေနဲ့ နင့်တို့ စောက်ပတ်က အရမ်းရွံဖို့ကောင်းတယ်။
hayyyyyyy ngar than shwe 420 shi thay dae lay,bar lae sae lo ma ya lo lar? sae bar kwar minamay saut pat bar lo kwe nay dar lae? minn kwar de lot min ko challance lot dae tawwwwww tharrrrrrrrr saut yuuuuuuuu .................... ENGLISH WEB PAGE PYAWN BAR LAR
GENERAL THAN SHWE420
''ISLAM ALWAYS LONG LIVE IN MYANMAR THAT IS MY CHALLANCE''
ဘုန်းကြီးတပါးကလဲဟောဖူးတယ်။"သူကကိုယ့်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့ကိုယ်ကစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုသူကပိုင်သွားတယ်" တဲ့ ။ဘာဆိုလိုချင်လဲဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လား
သိပ်လဲစိတ်မတိုပါနဲ့ အသက်တိုတတ်တယ် ၊ ကျုပ်ကိုဆဲရမှစားဝင် အိပ်ပျော်မယ်ဆိုရင်များများသာဆဲနော် (မိဘဂုဏ်ကိုလဲမြှင့်တင်ရာရောက်တာပေါ့)
တောသားကိုကျုပ်က မိဘဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ် တောသားကံကိုသာအပြစ်တင်ရမှာပေါ့လေ
.... ဟေ့ကောင်တောသား မင်းကထိတော့ နာတတ်သားပဲကွ ( ခွေးလဲ ဒီအတိုင်းပဲ )
.... လွတ်လပ်စွာ ရေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဘယ်ခွေးသတောင်းစားက ရေးထားတာလဲ။ မင်းအမေ့လင် ငါရေးတာမဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ ငါ့ဟာငါ name ဘယ်နှစ်ခုပဲဖွင့်ဖွင့် မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ အခြောက်လို ဂန်ဒူးလို လာပြောမနေနဲ့။ စိတ်မဝင်စားဘူး။
.... သူတောင်းစားပါးစပ်က အရိုင်းအဆိုင်းတွေထွက်တာ သိပ်မဆန်းပါဘူး။
....မင်းဟာမင်းမုဒိန်းကျင့်တာမကလို့ လူသတ်ကောင်ပဲပြောပစေအုံး . ( ကိုယ့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ သူတော်စင်တွေကို လမ်းဘေးမှာ မသေ သေအောင် ရိုက်သတ်တာမျိုး၊ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြီး သတ်ပြစ်တာမျိုး၊ စစ်ဖိနပ်နဲ့ ကန်တာမျိုး၊ ဝတ်ပြုကျောင်းတွေ ပိတ်ပြစ်တာမျိုး Islam ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်း ဒီလိုပုံစံမျိုး တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူးကွ။
.... Islam ဘာသာက ငြိမ်းချမ်းတယ်
.... ကိုယ့်ဘာသာဝင်အချင်းချင်း မစော်ကားဘူး
.... Islam ဘာသာဝင်တွေက သူများ ဘာသာဝင်တွေထက် ပိုပြီး ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတယ် ၊ ကိုယ့်ဘာသာကို တန်ဖိုးထားတယ် ၊ ယုံကြည်တယ် ။
.... လူလုပ်တဲ့ အရာတွေကို ဖျောက်ဖျက်လို့ ရရင် ရလိမ့်မယ် ၊ ငါတို့ရင်ဘက်ထဲ ၊ ငါတို့စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယုန်ကြည်မှူကို မင်းတို့သေရင်တောင် ဖျောက်ဖျက်ပြစ်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
.... နိုင်ငံကြီးတွေက စစ်လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ Islam နိုင်ငံတွေကို ဖိနှိတ်၊ နှိတ်စက်၊ ရန်းကားနေတာတောင် ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ Islam ကလက်မထောင်ထားစမြဲဆိုတာ မင်းပညာတတ်ဆိုရင် သုံးသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
.... မင်းလို မလောက်လေးမလောက်စား ဝပ်ဆိုက် သေးသေးလေး internet မှာတင်ပြီး စာလေးရေးရုန်နဲ့ မင်းရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ မင်းထင်နေလား။ ငါတို့က ဘောကြားတောင်မညှက်ဘူး။
.... မိုးပေါ်က ငှက်ကို ရေကူးခိုင်းမလား၊ ရေထဲက ငါးကိုမိုးပေါ်ပျံခိုင်းမလား မင်း computer ပညာရှင်တွေကိုလုပ်ခိုင်းလိုက် လွယ်လွယ်လေးပဲ။
.... computer ပညာရှင်တွေ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံ ရတယ်ကွ။
.... စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်ဆိုတာ ထိုင်ရပ်ကြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့လူ ( မေးစေ့ထောက်ပြီး အိပ်နေတာတောင် မြင်ဖူးသေးတယ် ( တော်တော်အပျင်းကြီးတာ) တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကွ၊ ဒီလိုလူမျိုးကို မင်းတို့ မလို့ ကိုးကွယ်နေသေးတယ်။
.... ဘိုးစဉ် ဘောင်စက် အပျင်းကြီးတာသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ သူများအနောက်ရောက်နေတာ မင်းအသိဆုံးပဲ။
.... သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာတဲ့ ( ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား )
.... မင်းလူမျိုး မင်းလာသာကို ချစ်ရင် ဘုန်းကြီးတွေကို တုတ်နဲ့ရိုက် ဖိနပ်နဲ့ကန်နေတာ သွားပြီဝင်ရိုက်ပါလား။
.... internet မှာ အခြောက်လိုလို ဂန်ဒူးလိုလို လာအော်မနေနဲ့။ အကျိုးမရှိဘူး ကျက်သရေတုံးတယ်။
.... ဟေ့ကောင် မင်းကို တစ်ခုပြောလိုက်မယ် ။ Islam ဘာသာဝင်အချင်းချင်း လမ်းမပေါ်မှာ ပုံပျက် ပန်းပျက် နှိတ်စက် ရန်းကားနေတာ ငါမမြင်ဖူးဘူး ။
.... မင်းရေးထားတဲ့ စာတွေကို ငါ အိမ်သာတက်တာလောက်တောင် ဖီလင် မလာဘူး။
.... သတင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေကို လာမပြနဲ့ စိတ်မဝင်စားဘူး။
.... ငါကနေမှ မင်းအမေကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ဟာ လုပ်ပေးဆိုရင် computer ပညာရှင်တွေကို ပိုက်ဆံ ပေးလိုက်ရုန်ပဲ။ Quality ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ပီပီပြင်ပြင်လေး လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ သိပ်မကြာဘူး လွယ်လွယ်လေးပဲ။
.... ဇာဂနာ အဖမ်းခံရတာ ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းလောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှန်တယ်။ မင်းအမေကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အမှူနဲ့ ခဏဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ ( ၅၄ နှစ် )
.... တရားစီရင်တဲ့ရုံးတဲ့ ရပ်ကွက်မသာအိမ်က ဖဲဝိုင်းကျနေတာပဲ လူ ၄ ၊ ၅ ၊ ၆ ယောက်နဲ့
.... တရားစီရင်တဲ့ တရားသူကြီးကလဲ သူထိုးထားတဲ့ ၂ လုံးထီနံပါက်ကို တရားစီရင်တဲ့နေရာမှာ အသုံးချသွားတယ် ( ၅၄ )
.... ဒီလောက်ဆိုရင် မင်းတို့အမျိုးကြောင်း သိလောက်ရောပေါ့
.... ဒီတော့ ခွေးသတောင်းစားတောသား မင်းဖင်ရောပါးစပ်ရော ပိတ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်နေ ၊ တခုခုဖွင့်လို့ကတော့ မင်းငါ့ကို ကြွက်တွင်းပါမချန်ဘူး ပြောထားတယ်..
.... ခွေးကိုလူစကားပြောတတ်အောင် သင်ပေးနေလဲ အပိုပဲ။
.... ဒါ့ကြောင့် ခွေးသတောင်းစားတောသား မင်းကို ငါဘာဖြေရှင်းချက်မှပေးမှာ မဟုတ်ဘူး ။
ကြေနပ်ရင်ကြေနပ် မကြေနပ်ရင် ဖင်ခံ
ခွေးသတောင်းစားတောသား နှင့် သူ၏နောက်လိုက်ခွေးများ၏ အာရုံစိုက်ခြင်း ခံထားရသူ
ZARNI ( မကြေနပ်ရင် ဖင်ခံ )
ဒါတွေကို မင်းဖြေရှင်းနိုင်မှ သူများဘာသာကိုဝေဖန်
....သူများ ဘာသာ ကို ဝေဖန်ချင်ရင် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ ကို တန်ဘိုး ရှိအောင် တန်ဘိုး ထားတတ်အောင် အရင် လုပ်ကွ .....
''ISLAM မြန်မာပြည်မှာအမြဲရှင်သန်စေရမည်။ ''
ဟေ့ကောင်စစ်ခ္ဂေး ဖင်မျိုး အယ် မှားလို့ ZAW MYO မင်းနဲ့ မင်းကိုအားပေး သူကို လီးပဲ ။
မင်းတို့ဝြောတာမှန်တယ်ဆို blog ကို ENGLISH လိုရေးဘာလား။ဒါမှမဟုတ်ငါ့လီးထိပ်မှာလာအော။် ဟိုကောင် senior general than shwe မင်းကိုပြောရအํုးမယ် ၊ ဖင်ခํ ခြင်ရင် စစ်ခွေး တွေ ရှိတယ်။
Subject: ကျေးဇူးပြုပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ (အမြန်ဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ အရေးကြီးသည်)
စကားဦး - ယ္ခုပို့စ် မျှဝေတင်ပြရခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း
မွေးဖွားကြီးပြင်းကြသော မြန်မာ(ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေး)လူမျိုးများ၏Human
Rights ကို ရည်စူးပါသည်။ ကျတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်
ဘာသာရေးသည် လူတစ်ယောက်၏ ယုံကြည်ရာ၊ မျိုးစဉ်ဆက်ကိုးကွယ်ရာ၊
နီးစပ်ကြီးပြင်းရာ တို့နှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် မည်သည့်ဘာသာသည်
အကောင်းဆုံးဟု အငြင်းမပွါးလိုပါ၊ လူသားတစ်ယောက်၏ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်
ကိုးကွယ်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် European နိုင်ငံများနှင့်
Human Rights ကို တန်ဖိုးထားကျင့်သုံးသော နိုင်ငံများတွင် Freedom of
conscience -လွတ်လပ်စွာယုံကြည် ကိုးကွယ်နိုင်ခြင်း ကို လူသားတိုင်း၏
ယုံကြည်မှုအဖြစ် တန်ဖိုးထား ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။ ထိုဥပဒေ
တစ်ရပ်တည်းနှင့်ပင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နိုင်ငံမှ လူမျိုး ဘာသာမရွေးအား
၎င်းတို့၏ နိုင်ငံများတွင် ခိုလုံခွင့်များပေး၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားသည်မှာ
* ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာလှေစီးပြဿနာဖြစ်တဲ့ အချိန်၊
* ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများမှာ ထိပ်တန်းသတင်း အဖြစ်လူတွေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ အချိန်၊
* အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ကျမ်းဂန် နှင့် ၎င်းတို့၏တမန်တော်များ အားစော်ကားထားသော
အီးမေးများ online တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ရှားလာတဲ့ အချိန်၊
* ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အခြေခံပြီး အစိုးရ ဘလောက်ဟု ယူစရသော
ဘလောက်များတွင် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးမှစပြီး အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး
* အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား
အထင်အမြင်လွှဲမှားစေသော ဆောင်းပါးများ ဆက်တိုက်ဖော်ပြလာခြင်း၊
ဤသည်တို့ သည်အားလုံးတိုက်ဆိုင်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာတာလား?
သို့တည်းမဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိန်ကိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေတာလား?
ဒီပြဿနာမဖြစ်ခင် မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ် တို့
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် တိုင်းရင်းသားမြန်မာမွတ်စလင်မ်များ လည်း
အခြားသော ဘာသာဝင်များနှင့်လက်တွဲပြီး ဆရာတော်ကြီးများနှင့်
လက်တွဲပါဝင်ခဲ့မှုအား စိုးရိမ်လျက်ရှိသော နအဖအစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် သွေးခွဲမှုများပြုလုပ်ရန် plan များနှင့်
အစဉ်ကြိုးပမ်း နေချိန်တို့တွင် နောက်ဆုံး သတင်းရရှိချက်အရ နအဖ
အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတခု
အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ကျမ်းဂန် နှင့် ၎င်းတို့၏တမန်တော်များ ကိုစော်ကားထားသော
အီးမေးများ၊ ထိုစော်ကားသူ၏ နောက်ထပ်အီးမေးတစောင် တို့အပြင် အစ္စလာမ်ဆန်
့ကျင်ရေးဖော်ပြလာသော စစ်အစိုး ရ လိုလားသည့်
ဘလောက်ဆောင်းပါးများကိုအောက်ပါ link များတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်
padaukmyay.blog (ပိတောက်မြေသည် နေ့စဉ် နံနက်ပိုင်းများမှစတင်က
ywetwar.blog (သူကတော့ ဘာသာရေးဆွေးနွေးတဲ့ forum တွေမှာ
အစ္စလာမ်အကြောင်းဝေဖန်ရေးသားပြီး အစ္စလာမ် blog အတော်များများမှာ သူ့ 
blog address ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ရုရှနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ယူနေသော
မြန်မာ့စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ )
(မြန်မာပြည်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် မွတ်စလင်တို့ဆိုသည်မှာ အနည်းနဲ့အများ
ပတ်ပြီး အမျိုး တော်နေကြတာတွေရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေဟာ
ရှေးမြန်မာဘုရင်တွေလက်ထက် ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်လာခဲ့သည်၊
ဘုရင်တွေဆီမှာ အမှုတော်ထမ်းခဲ့တာတွေ သမိုင်းမှာရှိပါတယ်၊ ဦးကုလား
မဟာရာဇ၀င်တို့၊ မှန်နန်းရာဇ၀င်တို့မှာပါတယ်၊ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ဝင်တုံးကလည်း
ဘုရင့်တပ်ကမွတ်စလင်တွေ ခုခံကာကွယ်ခဲ့ ကြတယ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာလည်း မွတ်စလင်တွေပါကြတယ်။ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေဖို့ စည်း ရုံးရမဲ့အစား သတ်ဖြတ်ဖို့မီးမွေးတာ
၎င်းစစ်အစိုးရ၏ အာဏာတည်တန့်ရေး၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် စစ်အစိုး
မျက်နှာပျက်ခဲ့သည်များကို ပြည်သူများမေ့ပြောက်သွားစေရန် လူမျိုးရေး၊
မြန်မာညီအကိုမောင်နှမများ ကိုယ့်သွေး၊ ကိုယ့်အသက်၊ ကိုယ့်မိသားစုနှင့်
ယခုနောက်ဆုံးသတင်းရရှိသည်မှာ ၄င်းတို့သည် ယခု
ပေါ်ပေါက်လာအောင် ကြံဆောင်ကြမည်။ ပြီးနောက်တွင် ၄င်းတို့အလိုကျ
ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးကို အဓွန့်ရှည်စေရန် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်သွားကြမည်။ ဒါကြောင့် အားလုံး သတိရှိကြပါ။ ဘယ်သူခွဲခွဲ တို့မကွဲ
အမြဲစည်းလုံးမည် ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်ကို ပြည်သူများအားလုံး လက်ကိုင်ထားပြီး
တရုတ်အားကိုး ပုစိန်ရိုးဖြစ်နေသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် စစ်အစိုးရကို
တို့ ဗုဒ္ဓဟာ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုသာ ပြသခဲ့တယ်။ အစွန်းမရောက်စေဖို့
ဆုံးမခဲ့တယ်။ အားလုံးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းအောင်နေရမယ်။ ဘာသာတရားတွေဟာ တကယ်ကို
ငြိမ်းချမ်းကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမှာ
ပျော်စရာတွေရှိနေတာ။ အဲဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကို သင်တို့ရဲ့ အတ္တတွေနဲ့
အရောင်မဆိုးကြပါနဲ့။ ဘာသာတရားတွေကို စော်ကားတဲ့သူဟာ လူလို့တောင်
မသတ်မှတ်သင့်ဘူး။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို အများပိုင်းလုပ်ကြတာလဲ တို့ထဲက
လူနည်းစုတွေပဲ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မြန်မာဆိုရင်
the forward mail from real and respectable myanmar buddhist.
အဓိကလူတွေနားလည်ဖို့လိုတာကဘယ်ဘာသာမဆို ဘယ်လူမျိူးမဆိုအစွန်းရောက် ၀ါဒီသဘောတွေရှိတယ်ဆိုတာဘာဘဲ။ မွတ်ဆလင်လဲမွတ်ဆလင်အလျှောက်၊ဘုတ်ဒဘာသာလဲဘုတ်ဒဘာသာအလျှောက်.၊ခရစ်ယာန်လဲခရစ်ယာန်ဘာသာအလျှောက်..
အစွန်းရောက်ဝါဒီသမားတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုအ စွန်းရောက်သွားတတ်တဲ့လူတိုင်းဟာကိုယ့်ဘာသာမှအ မှန်..ကိုယ့်ဘာသာမှ
ကိူမျိုးလဲဘုတ်ဒဘာသာဝင်ပါပဲ..ဘုရားတော့မရှိခိုးဘူး..တရားထိုင်တာဘဲလက်တွေ့ကြတယ်ထင်လို့ပါ။ ဘာဘဲပြောပြော..ခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်တာကတော့..သူတစ်ပါးကိုမနာလိုဘူး၊ သူတပါးအကျိူးယုတ်အောင်လိမ်ညာမပြောဘူး၊ သူတစ်ပါးသားမယားမပြစ်မှားဘူး.မနာလိုတတ်ဘူး..
ဘုတ်ဒဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်နိတ်ဘန်ရောက်အောင်ကိုယ်တိုင်အနစ်နာခံခဲ့တာဘဲ (ဆုတောင်းခြင်းမပါ။)..ဆုမတောင်းလို့နိတ်ဘန်မရောက်..ချမ်း၂သာ၂မနေရဘူးဆိုလဲရှိဘာစေတော့။ i don't care.
ုဇော်မျိုး ပြောသလိုဒီလိုပုံပြင်တွေကြားလို့တစ်ခြားမွတ်ဆလင် တွေလဲဒီလိုသဘောရှိဘာလားဆိုပြီးဘာမှအချက်ကိုဂဂဏဏမသိဘဲ (ဟုတ်သည်ဘဲထားဦး) ဝါးလုံးနဲ့မသိမ်းရန်းဖို့လူသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ ဘာသာရေးဆိုတာကိုယ့်စိတ်ကိုပြင်တတ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းလိုက်နာစရာ handbookလိုပဲသုံးတာအကောင်းဆုံးဘာ။ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသူများကြိုက်လားမကြိုက်လားမသိ...အတင်းကြီးရိုက်သွင်းရင်ဘယ်ဘာသာမဆိုမကောင်းဘာဘူး။
့ကိုယ်စိတ်ဓါတ်ကောင်းအောင်ထားဖို့ဘဲယုံကြည်တယ်။ နောက်ဘ၀ရဟန်းဒါဖြစ်ရင်တော့တစ်မျိူးပေါ့ ..အကယ်ရွေ့နောက်ဘ၀ဆိုတာရှိခဲ့ရင်..
ကိုမျိုးမိဘတွေက ဒီလောက် ဗုတ်ဒဘာသာဝင်စစ်စစ်ဟာကိုဘာလို့သူက စောက်တလွဲဖြစ်နေတာလဲထင်ချင်ထင်မယ်..
that i don't giveadamn.
ဗုတ်ဒဘာသာဝင်တွင်မဟုတ်ဘာဘူး..အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာဘဲကြည့်...မွတ်ဆလင်တွေဆို 9/11 နောက်ပိုင်းကစပြီးလူတွေကသောက်မြင်ကပ်ကြတယ်..
ဘာသာတွေကိုခုတုံးလုပ်ကြမှာဘဲ...မင်းတို့အယူတွေသည်းနေသမျှ...ဒီ ကဘာ ကြီးမှာဒရာမာတွေများနေဦးမှာဘဲ..
ဘာသာဝင်တွေလဲရွာလုံးကျွတ်အလှုလုပ်တာကြားဘူးပါစ? အဲ့ဒီရွာလုံးကျွတ်အလှုကသက်သတ်လွတ်ဆိုရင်တော့ ထားလိုက်ပါတော့မငြင်းတော့ဘာဘူး)
ဘာလို့ဘုရာစင်းတုတွေရှိခိုးတာဆိုးတယ်...(ချာ့ခ်ျ၊ ဘလီ၊ ဘုရားစင်ကဘာတွေလဲ)ဆိုပြီးငြင်းနေလို့ကတော့...အင်း..၂၁ရာစုကြီးရောက်တာတောင်တို့တွေ ၁ရာစုကလူတွေရွှီးနေတာကိုနားထောင်နေကြလို့..
.အင်း...ဘာမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတိုးတက်သေးဘာလားလို့ဘဲ ကိုမျိုးယုံကြည်လိုက်ပါတယ်၊
ဘယ်လူမျိူး.ဘယ်ဘာသာ..ဘယ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမဆို.. liberal/moderate/conservative/extremist ဆိုပြီးအခြေခံတွေကွဲတာရှိပါတယ်..ဒါဘယ်အသိုင်းအ၀ိုင်း ဘယ် society မှာဘဲကြည့်ကြည့်တွေ့နိုင်ဘာတယ်..ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်ဝါဒီဟုတစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ်တစ်ခါမှမကြားဘူးဖြေဘာဆိုတော့..
ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာကိုလက်တွေ့ယုံကြည်လိုက်နာကျင့်သုံးတာဟာ...ideally the best path လို့ဘဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်..
၁) တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မူဆလင်များနှင့် တိုင်းခြားသား လူမျိုးမူဆလင်များအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုရဲ့ အမြင်
ဒီအကြောင်းကတော့ တင်ပြသူနဲ့ ကျွန်တော် အထူးသဘောထားမကွဲလွဲပါဘူး။ တစ်ထပ်တည်း မတူရင်တောင် နီးစပ်မှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်။ လူ့သဘာဝအရ တူရင် သွေးစည်းတယ်။ ကွဲရင် စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်တယ်။ ဘာသာတူလို့၊ လူမျိုးတူလို့၊ နိုင်ငံသားတူလို့၊ နေရပ်တူလို့ ဆိုပြီးသွေးစည်းကြတဲ့ သာဓကအများကြီးရှိတယ်။ ခံစားချက်တူလို့၊ လိုက်နာနေရတဲ့စည်းကမ်း ဥပဒေတူလို့ သွေးစည်းကြတာတွေရှိတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့် အချို့ဆိုရင် ဘာမှအရေးတကြီးမဟုတ်လှတဲ့ နာမည်တူတာတောင် ညီညွတ်ချင်သလိုလိုတွေ တွေ့ဖူးတယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးချင်းပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုတဲ့အသိနဲ့ ခင်တွယ်ချင်တဲ့စိတ်က သွေးစည်းဖို့ကို နီးစပ်သွားစေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား ကွဲပြားနေတော့ စိတ်ဝမ်းလည်း ကွဲချင်ချင်ဖြစ်နေတယ်။ တိုင်းခြားသားလူမျိုး မူဆလင်များအပေါ်မှာတော့ ကိုးကွယ်မှုဘာသာလည်းမတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနဲ့ တိုင်းခြားသားလူမျိုးတွေဆိုတဲ့ အသိကလည်း ခွဲခြားလိုက်တော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ညီညွတ်နိုင်စရာ အခြားတူညီမှုတွေတော့ ဖော်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးက တည်ဆောင်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ ကိုလိုနီအစိုးရ၊ ဖက်ဆစ်အစိုးရ အစရှိတဲ့ သူတွေအုပ်ချုပ်စဉ်က တူညီတဲ့ခံစားချက်တွေရှိခဲ့တယ်။ အတူတကွ အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် စသဖြင့်ပေါ့ တူညီတာတွေ ဖော်ထုတ်ရင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုက တည်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ မျှတတဲ့ အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတော့ လိုပါလိမ္မယ်။
အားလုံးက စည်းလုံးကြတယ်ဆိုရင်တော့ အင်အားဖြစ်တောပေါ့။ လောကအတွက် အကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာသုံးရင် စည်းလုံးခြင်းအင်အားက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအင်အား အစကတည်းက မရှိခဲ့တာပိုကောင်းတယ်။ မစည်းလုံးတာကလည်း ပြဿနာ အကြီးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးမစော်ကားသေးသမျှ ဥပဒေစကားနဲ့ ပြောရရင် အမှုကိစ္စကိုး မဖြစ်သေးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ နိုင်ငံသားအားလုံးကို (ဘယ်သာသာကိုးကွယ်သူဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်) တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေဖို့အတွက် စည်းလုံးစေချင်ပါတယ်။
အခြားပို့စ်တွေမှာ စောက်ကုလား ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတာတွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့ စောက်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မြန်မာစကားမှာ စိတ်ဆိုးတဲ့ အခါမျိုးမှာ၊ မနှစ်မြို့ကြောင်းပြောလိုတဲ့ အခါမှာ အသုံးများကြပါတယ်။ ဆဲတာလို့ မပြောသာရင်တောင် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပြောလာရင်တော့ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်ပေါက် အားလုံးကို လိုက်ပိတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ အပြောခံရတာများလာရင် ငါဘာများမှားနေလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေခြာပြန်ပြီး ဝေဖန်သုံးသတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ဒါမှလည်း မုန်းသူတွေနည်းပြီး ချစ်တဲ့သူ၊ ခင်တဲ့သူ များလာအောင် နေစရာ နည်းလမ်းတွေ့လာမှာပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကိုယ့်အန္တရာယ်ပမာဏကို လျော့ချပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ အကြံပေးချင်တာက မြန်မာပြည်မှာ စောက်ကုလားဆိုတဲ့ အသုံးတွင်ကျယ်လာရင် ပြုပြင်ဖို့တာဝန်အရှိဆုံးက ကုလားတွေပါပဲ။ ဘာသာတရားကို စောက်နဲ့တွဲပြီး ပြောတာများလာရင် အဲဒါတွေလျော့ကျသွားဖို့ တာဝန်အရှိဆုံး (အတတ်နိုင်ဆုံးလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။) ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အဲဒီဘာသာဝင်တွေပါပဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးစုကို၊ ကိုယ့်ဘာသာတရားကို မုန်းသူနည်းပါးသွားအောင် လုပ်တာ ချစ်ခင်သူ များအောင်လုပ်တာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ စကားလုံးကြီးကြီးသုံးရရင် သာသနာပြုတယ်တောင် ပြောလို့ရလောက်တယ်။
သူ့ကျွန်ဘဝတိုက်ပွဲခေတ်ကစလို့ ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ တန်းတူ အပင်ပန်းခံပြီး နိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက် ကြိုးစားသွားခဲ့ကြတဲ့ မူဆလင်အမျိုးသားတွေရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်။ လေးလည်းလေးစားတယ်။ အဲဒါကြောင့် မူဆလင်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု မတူကြသူတွေဆိုတာက လွဲလို့ အခြား စော်ကားလိုတဲ့ အမြင် နှိမ်ချဆက်ဆံလိုတဲ့ အမြင် မရှိပါဘူး။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ လူကောင်းတွေရှိသလို လူယုတ်မာတွေလည်းရှိမှာပါပဲ။
၂) လူတွေကို ဘာသာရေးနဲ့ ဆွယ်ပြီး လူသတ်လက်နက်အဖြင့် အသုံးပြုခြင်း
ဒီခေါင်းစဉ်က စကားဝိုင်းစတင်သူ အားတတ်သရော တင်ပြသွားပြီး စကားဝိုင်းတလျောက်လုံး ပျောက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာ။ ဘယ်သူမှ မဆွေးနွေးကြဘူး။ ကျွန်တော်ပြန်ပြီး အစဖော်လိုက်ပြီ။ ဒီအကြောင်းအရာမှာတော့ စတင်ဆွေးနွေးသူနဲ့ ကျွန်တော် တော်တော်လေးကို ကွဲလွဲတဲ့သဘောတွေပါလာနိုင်တယ်။
မှန်တယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက အစ္စလမ်သာသနာ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံတကာက မက်မောလောက်တဲ့ သယံဇာတတွေရှိတယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။ ဥရောပနဲ့ အမေရိကားက ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံတွေလောက် လက်နက်အရာမှာ၊ နိုင်ငံရေးသြဇာအရာမှာ၊ စီးပွားရေးဈေးကွက်အရာမှာ နိမ့်ကျနေကြတယ်။ အင်အားကောင်းတဲ့ သူက အင်အားနည်းတဲ့သူကို ချယ်လယ်လိုတယ်ဆိုတာလည်း လူတွေရဲ့သဘာဝပဲ နိုင့်ငံတိုင်းက အစိုးရအဖွဲ့ အသီးသီးဟာ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတာဆိုတော့ အဲဒီသဘာဝက နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းသဘောနဲ့ ဗိုလ်ကျအနိုင်ယူ ချယ်လှယ်တာမျိုးကတော့ အားမပေးလိုဘူး။ ကန့်ကွက်တယ်။
ဒါပေမဲ့နော် ဒီစကားဝိုင်စတင်သူ တင်ပြထားတဲ့ လူတွေကို ဘာသာရေးနဲ့ ဆွယ်ပြီး လူသတ်လက်နက်အဖြင့် အသုံးပြုခြင်းကတော့ အထက်ကပြောတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ယုတ်ညံ့အောက်တန်းကျတယ်။ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ ကန့်ကွက်ရမယ်။ ရှုတ်ချရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အင်အားသုံးပြီးတားမြစ်ရမယ်။ အင်အားကောင်းလို့ လာတိုက်တဲ့သူက လက်နက်ကို လက်နက်လိုသုံးနေတာ ခုခံတဲ့သူက ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး လူကို လက်နက်လိုသုံးနေတာ။ အဲဒါလုံး မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ။ ခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူက အဖြစ်မှန်ကို လက်ခံရဲရမယ်။ လက်နက်အင်အား နည်းရင်နည်းတယ်ပေါ့။ ဖြစ်လာတဲ့ အနေအထားပေါ်ကနေ တိုင်းပြည်အတွက် လူထုအတွက် အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ဖန်တီးယူနိုင်ရမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ် အခြေခံနဲ့ ဖြစ်ရမယ်။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်လာကျူးကျော်တာကို လက်ပိုက်ကြည့်နေရမယ်လို့ မပြောဘူးနော်။ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ ရှေ့တန်းကနေ အသေခံပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ပွဲဝင်ရင် ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် အလေးပြုလျက်ပါ။ လေးစားလျက်ပါ။ ခုသုံးသွားတဲ့စကားလုံးက ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး လူတွေကို လူသတ်လက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ ဒီလောက် အရှည်ကြီးဆွေးနွေးနေရတာ။
အထက်က အကြောင်းအရာကိုပဲ ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ ဆက်ပြောပါရစေ။ ဒီစကားဝိုင်းမှာ အခြားပို့စ်တွေမှာဖတ်လိုက်ရတယ်။ အစ္စလမ်ဆိုတဲ့ အမည်ကိုက ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့။ ဘယ်လောက်လှလိုက်တဲ့ အမည်လဲ။ သိပ်ကောင်းတဲ့နာမည် တန်ဖိုးတောင်မဖြတ်နိုင်အောင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး လူသားတွေကို လူသတ်လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုတတ်တဲ့ လူအချို့ကြောင့် အစ္စလမ်ဆိုတဲ့ အမည်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ ဘာသာခြားတွေရဲ့ နားထဲမှာ အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ အမည်ကို မကြားဝံ့မနာသာဖြစ်လာတယ်။
ဝါကျက ဘာသာခြားတွေပါးစပ်ဖျားကို ရောက်သွားတယ်။
ဥပမာနဲ့ပြောရရင်တော့ ကြမ်းတိုက်အဝတ်မဝယ်မိလို့ ရွှေထုပ်တဲ့ မြပဝါနုနုလှလှလေးသုံးပြီး ကြမ်းတိုက်လိုက်သလိုပါပဲ။ မြပုဝါပါးလေးလည်း ရွှေရတနာ ထုပ်ပိုးဖို့ကို မဆိုထားနဲ့ လက်နှီးအဖြစ်သုံးဖို့တောင် အများတကာ မသတည်စရာဖြစ်ရပါတော့တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ဘာသာတရား ခုတုံးလုပ်ပြီး သုံးစား ခံလိုက်ရတော့ လူတွေက အလန့်တကြားဖြစ်ပြီး အဲဒီဘာသာဝင်တွေဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ အနေအထိုင်ကြပ် အသွားအလာကြပ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံတော့ မှုတ်ဆိတ်ရှည်ရှည်ထားရင်တောင် လုံခြုံရေးက သတိပြုခံရတယ်၊ လေယာဉ်ကွင်းအများစုမှာ စစ်ဆွေးမှုပိုကြာတယ် ဒီလိုတွေထိဖြစ်လာပါတယ်။
Islam ဘာသာဝင်တိုင်းနီးနီးက အခြားဘာသာတွေထက် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းကြတယ်။ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြရင် အသုံးပြုနိုင်ရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ လက်နက်မရှိပါဘူး
စကားဝိုင်းစတင်သူက အထက်က ပြထားတဲ့ အသုံးအနှုံးကို သုံးထားတယ်။ အတွေးအမြင်သက်သက်ကို တင်ပြတာဆိုရင်တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာမျိုးဆိုလို့ကတော့ ကျွန်တော်အမြင်နဲ့က ဆန့်ကျင်နေပြီ။ အားကြီးလို့ အနိုင်ကျင့်သူကို မထောက်ခံပါဘူး ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူတွေကို အကောင်းဆုံးလက်နက်လို သဘောထားပြီးသုံးစွဲတာကတော့ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းစာလို့မရတဲ့ အပြစ်ပါပဲ။ ဘာသာရေးအပစ်တွေ လူမှုရေးအပစ်တွေကတော့ စဉ်းစာကြည့်လေ ပေါ်လေပါပဲ။ အဲလိုဝါဒီတွေ ဦးဆောင်နေတဲ့ သာသနာကတော့ လူမုန်းများမှာပါပဲ။ ဒါကအကြောင်းကြောင့် အကျိုးပါ။
မှားချင်လည်း မှားမယ်နော်။ ကျွန်တော်ထင်တာပြောရရင် အစ္စလမ်ဘာသာက ကျမ်းဂန်ထဲမှာကိုပဲ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက် သားရင်းကို စတေးစေပြီး ဘုရားသခင်က ယုံကြည်မှုစမ်းသပ်တာကို ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုးက ဘုရားသခင်အပေါ်အလွန်အမင်း ယုံကြည်အလိုလိုက်လွန်းတာကို အမွှမ်းတင်ထားလို့ အဲဒီသာသနာမှာ ကိုင်းရှိုင်းသူတွေဟာ ဘာသာရေးနဲ့ ဆွယ်ပြီး လူသတ်လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ လွယ်ကူနေလေသလားတော့ စဉ်းစားစရာပဲ။
၃) သားကောင်ကို လည်လှီးခြင်း။
တိရိစ္ဆာန်တွေကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို အများစုကလည်း မတူကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဥပဒေတွေပါ ပြဌာန်းပြီး ကာကွယ်ပေးထားကြတာပေါ့။
လည်လှီးပြီးသတ်တာက သားကောင်ကို ချက်ချင်းသေစေတယ် ဒုက္ခဝေဒနာကြာကြာမခံရစေဘူးဆိုတဲ့စကား ကြက်လိုအကောင်မျိုးတွက် အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ နွားလိုဆိတ်လိုအကောင်မျိုးအတွက်တော့ မသေခြာဘူးထင်တယ် (ကျွန်တော် လည်းမမြင်တွေ့ဖူးလို့ အတိအကျမသိပါဘူး။) အကောင်ကြီးတော့ အပြီးဖြတ်ဖို့ မလွယ်နိုင်တာကြောင့် အခြားပိုပြီး လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေများရှိမလားလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြို့ကလေးမှာ အမဲသားနှင့် ဆိတ်သားရောင်းတဲ့ သူတွေက အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပါ။ သူတို့ကလည်း ရောင်းဖို့အတွက်သတ်ရာမှာ လည်လှီးပြီးမသတ်ဘူး အခြားသေလွယ်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့သတ်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ပြောချင်တာက သေလွယ်တယ်တို့ ဝေဒနာခံစားရချိန်တိုတောင်းတယ်တို့ ဆိုတဲ့စကားတွေက ဘာသာတရားလေ့လာပြီးပြောလို့ မခိုင်လုံပါဘူး။ သားကောင်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒကို လေ့လာပြီး တင်ပြမှပိုပြီးခိုင်လုံပါတယ်။ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ စောဒက တတ်ဖို့တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်တွေအတိုင်း ဘာသာရေးစာပေမှာ မပါရင်လည်း စိတ်ထင်နဲ့ မှန်းပြီးမပြောသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ အချက်ကို မခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ လျောက်လွှဲပြီးရှေ့နေလိုက်သလို ဖြစ်နေပါလိမ္မယ်။
ဝက်သားမစားတာကို လှောင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေး ကိုလည်း ၂ ဖက်အမြင်ရှိကြ ရင်နားလည်ပေးနိုင်မှာပါ။ သူတို့က စားနေတာကိုး သူတို့နဲ့ မတူတော့ လှောင်တော့မှာပေါ့။ ဒါလူ့သဘာဝပဲလေ။ လှောင်တာကြီးကို ထောက်ခံဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့မတူရင် လှောင်ချင်တာက လူ့သဘာဝပဲလို့ပြောချင်တာ။ နားလည်မှုရလွယ်အောင် ပြောလိုက်ပါ့မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အပါအဝင် အခြားဘာသာဝင်တွေက ဆင်တုတော်တွေကို အရိုအသေထိုင်ပေးတော့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ရင်ထဲ ဘယ်လိုရှိမယ်ထင်သလဲ။ ပါးစပ်က ထုပ်ဖော်မပြောကြားရင်တောင် စိတ်ထဲကတော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိတွေ အပင်ပန်းခံ လုပ်လိုက်ကြတာလို့ တွေးထင်သူကများမှာပါ။ သူ့အတွေး ကိုယ့်အတွေးမျှအောင် ကြည့်လိုက်နိုင်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ နားလည်ပေးလိုက်ပါပြီ။
အမဲသားမစားတာ၊ သတ်သတ်လွတ်စားတာ တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတွေကြားမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတာလည်း မဟုတ်ဘူး ထူးထူးခြားခြား အကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ ကျင့်စဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိလို့ အလုပ်ပိုတွေ လုပ်ကြပါလားဆိုပြီး လှောင်ချင်တယ်။ တတ်နိုင်သမျှတော့ ပြဿနာနည်းအောင် ဖွင့်ဟမလှောင်ပဲနေပါတယ်။ ဒါတောင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သတ်သတ်လွတ်စားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူး ရှင်ဒေဝဒတ်ရဲ့ ကျင့်စဉ်လို့ပြောမိလို့ စိတ်ဆိုးခံရဖူးပါတယ်။
ဝက်သားစားတာ/ မစားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ ဆက်ဆွေးနွေးထားသေးတယ်။ ထမင်းစာတဲ့လူတိုင်း သိပါတယ်ဆိုတဲ့ ဝါကျမျိုးလည်းသုံးသွားတော့ ပြောချင်လွန်းကြီးလို့ ဒေါသသံပါနေတယ်။ ငါ့စကားလက်မခံရင် ထမင်းစားနေသူမဟုတ်လို့ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားရင် မြန်မာစကားအနေနဲ့တော့ ရင့်သီးတယ်လို့တောင် ပြောသင့်ပါတယ်။ ဖိုရမ်ပေါ်က အခြားဆွေးနွေးဖက်တွေကို မလေးစားရာကျပါတယ်။ သတိထားစေချင်လို့ပါ။ ဒီစကားအတွက် ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်မနေပါဘူး။
ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က ပြောချင်ရင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာလေ့လာပြီးပြောတာက ပိုမိုခိုင်လုံပါလိမ္မယ်။ ဘာသာရေးလေ့လာပြီးပြောတာကတော့ အထက်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ မခိုင်မလုံနဲ့ မျက်စေ့မိတ်ရှေ့နေလိုက် ကာကွယ်ရကျနေပါ့မယ်။ တကယ်တော့ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေး ဆက်စပ်မှုက ဒီလိုအပေါ်ယံပြောရလောက်အောင် မလွယ်ကူပါဘူး။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပုံမှန်ထမင်းစားချိန်မှာ မစားလိုက်ရပဲ နောက်ကျသွားရင် ဗိုက်ထဲက မခံမရပ်နိုင်အောင် ဆာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးတွေ၊ သီလရှင်တွေ ညစဉ်ညတိုင်း မစားမသောက်နေကြတာတောင် အသားအရေတွေကြည်လင်လို့ ဝဝဖြိုးဖြိုးနဲ့ သက်တမ်းရှည်စွာနေကြတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ယူရင်လည်း ရတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ထင်ပါတယ်။
တဆက်တည်းပြောရရင် လူတစ်ယောက်အတွက် အသားဓာတ်လိုအပ်မှုဆိုတာလည်း လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး၊ ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခု၊ မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူနိုင်ပါဘူး။ လုံးဝမစားပဲ ကျန်းမာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ စားဖို့လိုအပ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုယ်တိုင်က အသားကို ဓာတ်စာပေးရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အစ္စလမ်တို့ရဲ့ ဓလေ့တွေကို ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေဒီလောက်ထိ ထောက်ခံချက်ပေးဆွေးနွေးလွန်းလာရင် မေးစရာရှိတာက
-ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ အကျန်းမာဆုံးတွေလား?
-ဒေသတစ်ခုချင်းဆီမှာရော အစ္စလမ်နဲ့ အခြားဘာသာဝင်တွေ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း သိပ်ကွာနေလား?။
အဲလိုတွေမေးလိုက်ရင် အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့ အပင်ပန်းခံဆွေးနွေးနေပြီး အောက်ပိုင်းကျမှ ကိုရွက်ဝါက ကလေးဆန်ဆန်မေးခွန်းတွေ မေးသွားတယ်လို့ ပြောစရာရှိတယ်။ မေးရတာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေ ရဲ့ အဆုံးအမလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ကာယကြီးဟာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု နဲ့ အာဟာရလို့ ခေါ်တဲ့ အကြောင်းတရားလေးပါးပေါ်မှာမှီနေပါတယ်တဲ့ အဲဒီကောင်တွေ အပြောင်းအလဲပေါ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကာယကြီးကလည်း ကောင်းသော အပြောင်းအလဲတွေ၊ ဆိုးသောအပြောင်းအလဲတွေ ခဏမစဲ ဖြစ်နေပျက်နေပါတယ်တဲ့။ အပြည့်အဝ လက်မခံရင်တောင် အကြောက်အကန်တော့ ငြင်းချက်ထုတ်စရာတော့ မရှိကြလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်က အလေးထားပြီးဖတ်မယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်စာရေးပါ့မယ်။
အရေပြားလှီးခြင်းကို အစကတော့ အစ္စလမ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျင့်စဉ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ တမန်တော်မိုဟာမက် ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ကျင့်စဉ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ အခုတလောမှ ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာတွေလေ့လာပြီး ဒီကျင့်စဉ်ဟာ တမန်တော်မိုဟာမက်ထက် များစွာအသက်ကြီးမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ စကားဝိုင်းစတင်သူကလည်း လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျောင်ကလို့ ပြောလိုက်တော့ ပိုပြီး ခိုင်မာသွားတယ်။
ကျွန်တော်အထက်တန်း ကျောင်းသားအရွယ်လောက်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အစ္စလမ်မဟုတ်ပေမယ့် အရေပြားလှီးကြတဲ့ ခေတ်ပညာတတ်တွေကို တွေ့ဖူးကြားဖူးလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းဆက်ဖတ်တော့ အဲဒီအကြောင်းအရာက မဟုတ်မမှန်ကြောင်း ထိမ်းသိမ်းထားခြင်းကသာ ကျန်းမာရေးတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ရေးတဲ့ စာတွေလည်း ဖတ်ရတယ်။ အဲဒီတော့ နားမလည်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ကောင်းကောင်း နားမလည်ဘူး လှီးသင့်မလှီးသင့်လည်း ဒီအရွယ်ကျမှ မစဉ်းစာတော့ဘူး။ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတော့ သေခြလေ့လာပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့။
အရေပြားလှီးထားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် HIV ပိုး လိင်ဆက်ဆံရာကနေကူးဖို့ ရာခိုင်နှုံးမရှိသလောက်ကိုနည်းတယ်။
ဆိုတဲ့စာကြောင်း တော်တော်လေးကို ဆိုးဝါးလွန်းတယ်။ မသိနာမလည်တဲ့ ကလေးတွေ ဖတ်မိရင် သိပ်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ အထူးသဖြင့် အရေပြားလှီးပြီးသား လူငယ်တွေတွက် အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ အထက်ကစာကြောင်းကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီးများ မှားမိကြရင် ဘာမှလည်း အာမခံမပေးနိုင်ဘဲနဲ့ လုံးဝမရေးသင့်ဘူး။ တရားဝင်သုတေသနပြု ဖြန့်ဝေထားတဲ့ ကိုးကား စာတမ်းလည်းမညွှန်းဘူး။ အွန်လိုင်းမှာ ဗဟုသုတဖြန့်ဝေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိတတ်မယ်ဆိုရင် သိပ်ကြီးလေးတဲ့ တာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ တာဝန်ခံပေးမဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ ကိုးကား မရှိရင် ဖျက်ပစ်လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ် လို့ အကြံပြုပါရစေ။
အဲဒီစကားပေါ်ဝေဖန်ရရင်တော့ ပညာဗဟုသုတ အခြေခံနိမ့်ကျတဲ့ အလုပ်သမားလူတန်းစား လူမိုက်တွေကြားက ကွမ်းသွေးနဲ့ သုတ်လိမ်းပြီး လိင်ဆက်ဆံရင် AIDS မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကား အဆင့်အတန်းပဲရှိတယ်။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားလည်း ဖြစ်နေတယ်၊ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်လည်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေ ကနေ အငြိမ်းချမ်းဆုံးနည်းနဲ့ အဖြေဆီချည်းကပ်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး တွေးမိသမျှကို ချရေးပြတာပါ။ မှားနေတယ်လို့ စောဒကတတ်ချင်ရင်လည်း တတ်လို့ရပါတယ်။ လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ ပါယ်ချချင်လည်း ချနိုင်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေထက် ပိုမိုသင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းများတင်ပြ နိုင်ရင်တော့ ပါယ်ချခြင်းက အပစ်ကင်းတဲ့ ပါယ်ချခြင်း၊ အကျိုးရှိတဲ့ ပါယ်ချခြင်းဆိုရမှာပေါ့။)
စောက်ကုလား ခေါ်နေကြတဲ့ကိစ္စမှာ ကျွန်တော်က ခေါ်သူတွေကို အားပေးထောက်ခံခြင်း မပြုခဲ့ပါဘူး။ အပစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ရှုတ်ချပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော် အဆုံးအမမှာလည်း အဲဒီစကားမျိုးကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားတွေဖြစ်လို့ ဒုစရိုက်တရား ၁၀-ပါးမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး တားမြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်က ကိုဇော်မျိုး ပြောခဲ့သလိုတွေ ဒီနေရာမှာရေးလို့ရတယ်။
-ပြောတဲ့လူတွေဟာ ရှုထောင့်စုံကနေ ဂဃနဏ မသုံးသပ်ကြဘူး။
- ဒုစရိုက်ကောင်တွေဖြစ်တယ်။ (ဘုရားဟောကိုများ ကိုးကားမယ်ဆိုရင်)။
ဒီစကားတွေက ဆဲနေတဲ့လူတွေကိုပြောရင် အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ အဆဲခံရတဲ့လူတွေကို သွားပြောရင်တော့ သူတို့အတွက် ဒေါသပွားစရာသာဖြစ်စေလိမ္မယ်။ ကျွန်တော့်စာကို ဖတ်တဲ့သူတွေ ဒေါသမပွားစေချင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ ပွားအောင်သာရေးပါတယ်။
ဆဲနေကြတဲ့လူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးစာရေးတဲ့အခါ သူတို့ကို ကျွန်တော် ပစ်တင်ဝေဖန်ပါ့မယ်။ နောက်မဆဲကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းဖြောင်းဖြပါ့မယ်။ ဘာသာရေးအဆုံအမ၊ လူမှုရေး စတဲ့ရှုထောင့်စုံကနေ ကြည့်ပြီး အထက်က ကိုဇော်မျိုး သုံးသွားတဲ့ ဝေါဟာရတွေထက် နစ်နာမဲ့ စကားတွေနဲ့ ဝေဖန်ပါ့မယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ အဆဲခံနေရသူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများတွက် ရည်ရွယ်တာဖြစ်လို့၊ ကျွန်တော့်ဝါဒအရ မိမိကိုယ်ကို မိမိ သုံးသပ်/ဝေဖန်/အပစ်တင်/ပြုပြင်ခြင်း ကသာ အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ထင်လို့ အထက်ကအတိုင်း အကြံပေးတဲ့ စကားတွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခုက... ဘာသာတိုင်းမှာ ကောင်းတာရှိသလို မကောင်းတာလဲရှိနိုင်တယ်...
လက်ခံနိုင်တာ ရှိသလို...လက်မခံနိုင်တာလဲ ရှိနိုင်တယ် ....
အပေါ်မှာ ကိုဇော်မျိုးပြောသလို... ဗုဒ္မဘာသာမှာ ဘာလို့အရုပ်တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုထုပီး
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ကိုးကွယ်နေသလဲလို့ မေးလို့ရတယ် (ကန်တော့ပါ...စော်ကားလိုစိတ်လုံးဝမရှိပါ...အဖြေပေးစရာလဲမလိုပါ...ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရောက်အောင် ဥပမာတခုပေးခြင်းပါ) .... ဒါမဲ့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး ဘယ်မွတ်စလင်
ဒါမဲ့တော်ရုံတန်ရုံဘာသာရေး တော့ပစ်တွေ ခုနောက်ပိုင်းမဖတ်မိအောင်ကို ရှောင်ပါတယ်... အရင်ကဖတ်လိုက်ရင်လဲ
ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ချည်းပဲ.... ထပ်တရာဖစ်ပီး.... လုံးလည်လိုက်နေလို့....ဆက်မဖတ်တော့တာပါ...ဘာသာရေးတော့ပစ်ဆိုတော်တော်ကိုရှောင်ပါတယ်)
စိတ်ထဲမှာ ရှိရင်လဲရှိနိုင်တယ်... ဒါလူ့စိတ်ပဲ..ရှိချင်တာရှိလို့ရတယ်..ဒါမဲ့ အဲ့လိုကိုးကွယ်နေသူတွေရှေ့မှာ
သွားမေးတာ စော်ကားတာပဲဖစ်မှာပေါ့....ပီးတော့ ဒီဘာသာရေးတော့ပစ်တွေမှာ....အစ္စလာမ်အတွက်တော့ပစ်တွေ
တင်တင်ပီး ရေးကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကလဲ ဒါတွေချည်းပဲ ဖန်တရာတေနေပီ.... ဖိုရမ်ပေါင်းစုံလဲ
ကုန်လောက်ပါပီ.....မသိလို့မေးချင်တာဆိုရင်လဲ .... ရှင်းပြပေးကြရင်.... ပီးပီပေါ့နော်...
ခုက...ရှင်းပီးရင် ဒါဆိုဒီလိုလုပ်တာ မှားတာ..ဒီလိုကိုးကွယ်တာမှားတယ် ... ဒီလိုယူဆတာမှားတယ်လို့ ဝေဖန်တာတွေကများနေတယ်.... အဲ့ဒါဆိုရင်လဲ .... ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်က ဒီလိုတွေပြောခဲ့... ဒီလိုတွေ
သင်ပေးခဲ့လို့ သိလာတာ...ကိုးကွယ်လာတာပါ (For Me) ... အဲ့လူတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ရတော့မလား...ဒီဘာသာ..ဒီအယူအဆတွေ
လုပ်နေကြတာပါပဲ....အဲ့လိုပဲ အစ္စလာမ်တွေ ခရစ်ယာန်တွေရော... ဘာသာရေး
စာအုပ်တွေရှယ်မယ်....ဒီတော့ပစ်ထဲကလို.... ဘုရားမရှိခိုးတတ်တဲ့သူတွေ ရှိခိုးချင်လို့မေးရင် တတ်တဲ့သူကဖြေပေးမယ်...အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလား အေးအေးချမ်းချမ်း??
ဒါမဲ့ မွတ်စလင် ဒါမှမဟုတ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ တော့ပစ်များတင်လိုက်လို့ကတော့
ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ...လာကြပါပီ .... ဒီဖိုရမ်မှာ အဲ့လောက်ကြီး ပက်ပက်စက်စက်မဖစ်တာကိုပဲ
ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ (ဖိုရမ်၂ခု ပက်ပက်စက်စက်ရေးခြင်းကို မြင်ဖူးခဲ့ဖူး၏)
ကျနော့အနေနဲ့က ဘယ်ဘာသာကတော့ ဘာကြောင့်ကောင်းတယ် မွန်မြတ်တယ် ဘယ်ဘာသာကတော့ ဘာကြောင့်ဆိုးတယ် ယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတာကို စိတ်မ၀င်စားလှဘူး.
ဘယ်ဘာသာက အမှန်တရား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲ ဆွေးနွေးချင်တယ်...
ဆိုပါတော့ဗျာ အခု ဘာသာကြီးလေးခု နဲ့ တခြားလူနည်းနည်းပဲ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတွေ ရှိနေတယ်..နှစ်ပေါင်းလည်းထောင်ကျော်နေပြီ..
ဘာကြောင့် တကယ်မှန်ကန်တဲ့ ဘာသာတစ်ခုပဲ မကျန်ခဲ့တာလဲ
ဒါမှ မဟုတ်...ဘယ်ဘာသာမှ မမှန်ပဲ..အမှန်တရားက သက်သက်တစ်ခု ဖြစ်နေသလား...
ကမ္ဘာကြီးလုံးသလား ပြားသလား ...ဆိုတာ ခုချိန်မှာ မေးဖို့မလိုတော့သလို လူတိုင်း လက်ခံတဲ့အဆင့်မျိုးကို ဘာလို့မရောက်နိုင်သေးတာလဲ..
ဒါမှ မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာပညာ ကိုသင်တဲ့သူက အင်ဂျင်နီယာဖြစ်...ဆရာဝန်ပညာကိုသင်တဲ့သူက ဆရာဝန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုး...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတွေက နတ်ပြည်ရောက်ကြ။ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္မာန် ရကြပြီး ခရိယာန်ကောင်းတွေက ကောင်းကင်ဘုံသွားကြလိမ့်မယ်လို့ပဲ အကုန်သူ့နည်းနဲ့သူမှန်တယ်လို့ ယူဆကြတော့မှာလား..
မွတ်စ်လင်မ်များအပေါ် ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုရေးသားကြခြင်းသည် မွတ်စ်လင်မ်များအတွက်မည်သို့မှ ထိခိုက်ခြင်း မရှိ။ အမှန်ထိခိုက်နေသည်မှာ ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုရေးသားသောသူများပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အဆင့်အတန်းနှင့် စိတ်ဓတ်များကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ကမ္ဘာသိအောင်ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
အခုလို နအဖ အစိုးရ ၏ ပြည်တွင်း၌ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီး၍ မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးမှူ လုပ်နေချိန်တွင် တစ်ဘက်မှ ကောင်းကျိုးများရလာသည်မှာ မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်း ပိုချစ်ခင်ညီညွတ်လာကြခြင်း၊ အမျှော်အမြင်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းဘုန်း များ အရပ်သားများနှင့် မွတ်စလင်မ်များပိုမိုရင်းနှီးလာကြခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမျှော်အမြင်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းဘုန်း များက ၎င်းတို့၏ရိုင်းပျမှူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပါထိခိုက်စေ၏။ အမှန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လူတစ်ဘက်သားကို ရိုင်းပျရန်ဝေးစွ လူသားချင်းမေတ္တ္တာတရားထားရ၏ ဟုပြောလေသည်။
စစ်အစိုးရ၏အာဏာခိုင်မြဲရေးအတွက် မွတ်စလင်မ်မဆိုထားနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ကြီးများရဟန်းရှင်များပင် သတ်ဖြတ်ရိုက်နှက်ခြင်းခံရ၏။
မြန်မာပြည်သူများသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မ၊ှူ ၎င်းစစ် အစိုးရ၏မတရားမင်းလုပ်အုပ်ချူပ်မှူအောက်တွင် အကျပ်အတည်းများစွာနှင့် ထမင်းနပ်မှန်အောင်မနည်းကြိုးစားပြီးစားနေရသည့်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာကသိထားပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သူများသည် လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုပါကနှစ်ရှည်ထောင်ချခံရခြင်း၊ အိုးအိမ်များစွန့်ခွါ ထွက်ပြေးရခြင်း နှင့် refugee ဘဝသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းဘုန်း များ မှအစ အရပ်သားများ ခလေးငယ်များပါကျရောက်ခဲ့ရလေသည်။
ကျွန်တော့မှာရိုဟင်ဂျာသူငယ်ချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလည်းလို့ အန်တီစု ကိုမေးခဲ့တော့ အန်တီစုက မြန်မာပြည်မှာမွေးရင် မြန်မာလူမျိုးပဲသားလို့အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံများ နှင့် အမေရီကန် မှာတောင် သူတို့နိုင်ငံမှာ ၅ နှစ်လောက်နေရင် နိုင်ငံသားရပြီ။ သူတို့ဆီမှာမွေးလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားခလေးဆို ပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ ဤသည်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ အလွန်ကွာခြားသောစိတ်နေသဘောထားကိုသက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျောင်းမှအစရပ်ကွက်အထိ ခလေးများ ကုလား ကုလား bla bla bla သီချင်းများဆိုကြတာမမြင်ဖူး မကြားဖူးတဲ့လူတော်တော်နည်းလိမ့်မည်။ ငယ်ငယ်ထည်းကကြီးပြင်းတဲ့အထိ ဖြစ်နေလျှင် ထိုအမုန်းမီး နှင့် စိတ်သည်ငြိမ်းချမ်းသာယာမှူရှိမည်မဟုတ်။ အချိန်သာကုန်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားသည်လည်း ကုလားဟုအခေါ်ခံရသော India မှဖြစ်သည်ကို ကုလားမုန်းတီးရေးဝါဒဖြန့် စစ်အစိုးရအနေနှင့်မမေ့သင့်ပေ။
လူလူချင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားထားလျှင် အချစ်၏ ကြည်နူးမှူ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှူ အေးချမ်းမှူ တည်ငြမ်မှူတို့ကိုခံစားရပေမည်။
လူသားတိုင်းအချစ်၏ အရသာကို မြည်းစမ်း ဖူးပါလိမ့်မည်။ ထိုအရသာကိုပြန်သတိရကြည့်ပါ။
လူ့သက်တန်းသည်အလိုတိုလွန်းလှသည် အသက်ရှိနေချိန်တွင် ဘဝ၏ အေးချမ်းသာရာ ကြည်နူးမှူ ကိုသာရှာသင့်သည်။
လူတွင်အသားတုံးတစ်တုံးရှိသည် ကိုယ်ကောင်းရင်ထိုအသားတုံးသည်ဖြူမည်။ ကိုယ်ဆိုးလျှင် ထိုအသားတုံးသည်မည်းမည်။ ထိုအသားတုံးသည် နှလုံးသားပင်ဖြစ်သည်။
၀ထ္ကုတခုမှ စာတကြောင်း ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဗျာ။
" တို့နောက် ကျော်ကျော်က ဇော်ဇော်ရဲ့မျက်နှာ ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးပလိုက်တယ် ။ဇော်ဇော် မှာ မူး ပြီးလဲကျသွားတယ် "
ကျော်ကျော်က လူဆိုးလား| ဇော်ဇော် ကလူဆိုးလား ။
ပြောဖို့ခက်မယ်ထင်တယ်ဗျ၊ ၀ထ္ကုတခုလုံးက စာတကြောင်း ကိုပဲဖတ်ပြီးတော့ ။
အဲဒီ စာကြောင်း ရှေ့က စာကြောင်းက ဒီလိုဗျ
" ဇော်ဇော်သည် ကျော်ကျော်၏ ဗိုက်ကိုဓားမြောင် နဲ့ ထိုးလိုက်သည်။ တို့နောက် ကျော်ကျော်က ဇော်ဇော်ရဲ့မျက်နှာ ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးပလိုက်တယ် ။ဇော်ဇော် မှာ မူး ပြီးလဲကျသွားတယ် "
wanna give respect ko kyaw and ko myo.
we muslim people accept discussion, teaching and criticising withagood manner from the people like you.
and we don't afraid to admit our mistakes as well. for example, some comments that we gave were rude and some imformations concern about islam were wrong. we refer the muslim brothers and sister from this forum. Although i didn't give imformation concern with Islam, we all muslim brothers and sisters have responsibility to admit our mistakes and need to apologise even someone is wrong. That's the way we feel.
And wanna say thanks again for your comments.
After i read ur comments, what i knew myself is there are so many buddhist people who are so kind and polite..first i didn't really know that...first i thought only my relatives and my best friends(buddhist) can understand me and my muslim life.
Another thing I realised is I didn't see too much people wrote comment in that blog...So I asked one of the blogger.This blogger said that no one interested to write suchakind of blog. One more thing this blogger added is if he has extra money to buy another laptop, he will throw the existing laptop as he surfed this low-class blog. So ur(ko myo and ko kyaw) comments showed me to ignore villager Zaw Myo.
And we will not explain anything concern with Islam because Villager Zaw Myo just wrote this blog to get rid of Islam and to abuse Islam.
And we really thank to Zaw Myo as well . Because of him, we study about Islam more and more..and we havealot of chances to expalin about Isalm, Quran and Prophet(Muhammad) coz i gotalot of letter from my friends who are non-muslim and they want to know what Islam is??? before they didn't know anything. Because of Zaw Myo and their group 's forward mail, people want to know about Islam and I am very happy to explain...Every thoughtful Non-muslim people don't believe anything easily and they want to find out what's going on???
And i really like ko kyaw's example..that is
And also Quran is same like ko kyaw's example...when u found "kill" in Quran, people should not be assumed Quran shows this and that...
there must be an event behind this "Kill"
Ur different religion sister Nway Nway Aung who wants Islam long live forever and doesn't want to detroy Buddhisim
ဘာသာတရားများဖြစ်ပေါ်ပေါက်ဖွားရာ မူလဒေသတွေမှာ .... ၎င်းဘာသာများကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနည်းပြီး
ဥပမာ..... ဂျေရုဆလင် အနီး နာဇရက် (Nazarat) ရွာလေးမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့
ခရစ်ယာန် ဘာသာက ဂျေရုဆလင်မှာ ကိုးကွယ်မှုမရှိသလောက်ပါပဲ....အဲ့လိုပဲ...အိန္ဒိယမှာ ဖွားမြင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့
ဂေါတမရှဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဆိုရင်လဲ .... ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ယှဉ်ရင် အလွန်နည်းပါးတဲ့ ကိုးကွယ်မှုတခုသာ ဖြစ်ပေမဲ့
အခြားတိုင်းပြည်ဒေသတွေမှာတော့ ပြင်းထန်စွာ ကိုးကွယ်နေတာတွေ့ရပါတယ်....အဲဒါနဲ့တဆက်တည်းကိုမျိုးစဉ်းစားမိတာက
အိန္ဒိယမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ.... ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဗမာလူမျိုးတွေစတင်
ကိုးကွယ်တာက ပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်း (၁၀၄၄-၁၀၇၇ ခုနှစ်) လက်ထက်မှသာ ဖြစ်ပါတယ်....အနော်ရထာမင်းနဲ့
ခေတ်ပြိုင် ... မွန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ သထုံဘုရင်မနူဟာမင်း လက်ထက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက မွန်တွေရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်နေခဲ့တာ
ကြာခဲ့ပါပြီ.... အဲ့ဒီ့အချိန် ပုဂံမှာက အရည်းကြီးကိုးကွယ်မှုသာ ရှိနေခဲ့တာပါ.....အများသိကြတဲ့အတိုင်း...
အရည်းကြီးကိုးကွယ်မှုမှာ ယုတ်မာတဲ့ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာတခုဖြစ်တဲ့....."ပန်းဦးလွှတ်" "ပန်းဦးဆွတ်" ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ်...
လက်မထပ်ခင် ကိုယ့်သမီးပျိုကို .... အရည်းကြီးရဟန်းများနဲ့ .... တညတာ သို့မဟုတ် (တချို့သမိုင်းက ၇ရက် ၇ညလို့တောင်
ဆိုကြပါတယ်) ပန်းဦးဆက်ရပါတယ်....ဒါကြောင့်မွန်တွေက .... ဗမာတွေကို "ဟဲ့ ဂကူတီ" "ဟဲ့ ဗြဲတီ" လို့ခေါ်ပါတယ်...အဓိပ္ပါယ်က အရည်းကြီးရဟန်းနဲ့မွေးတဲ့ သူတွေလို့ဆိုလိုတာပါ....ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မွန်ရဟန်း ရှင်အရဟံရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ .... ဗမာတွေ ဗုဒ္မဘာသာကို ကိုးကွယ်ခဲ့တာ အဲဒီ့အချိန်ကနေဒီနေ့ထိပါပဲ.........
ရိုဟင်ဂျာတွေက မြန်မာလူမျိုးစုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ အခုမှ စစ်အစိုးရငြင်းနေတာတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ မြန်မာသမိုင်းမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာများအား တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို (၁၉၄၇-၁၉၇၄ ) ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရလည်းကောင်း ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှု့ ဥပဒေ နှင့်၁၉၈၂ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေများအရ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် ၁၈၂၃ ခုနှစ်မတိုင်မီကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပင်မနိုင်ငံအဖြစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးစုဖြစ်သည်ဟု အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စစ်တွေမြို့ကိုသွားပြီး ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးမယ်လို့ ကတိက၀တ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံရေး လူမှုရေး နှင့် စီးပွါးရေးတွေမှာ လျစ်လျှူရှုထားတာပါ တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ ဘာသာရေးတွေဘာတွေ မသိဘူး
ကုလား မြင်ရင် သတ်ချင်တယ် မုန်စားရင် ကုလားစာ မစားဘူး ကုလားဆိုင် မ၀ယ်ဘူး လုံးဝ မပက်သတ်ဘူး
ဝေးဝေးရှောင်တယ် ရွံလို့ မလွှဲသာလို့ ကုလားနား ကပ်ထိုင်ရတဲ့နေ့ဆို အဲအကျီ မ၀တ်တော့ဘူး.....
အဲဒါ ရင်ထဲက စကားပဲ
မကျေနပ်ရင် hatehero1500@gmail.com ကိုလှမ်းပြောလိုက်
this website owner has no brain.
he is not working for PEACE.
actually he is rapist cuz he rape to his friend "taw thar". .believe it or not.
you can ask their close friends. ( for example -hatehero1500@gmail.com is his
achit taw...opps!! so terrible...)
အမြင်ကိုပြောရရင်... ခုချိန်မှာ ဘာသာအယူဝါဒ တွေကို ပုတ်ခတ်ဆဲရေးနေရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အမိမြေကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်း
သဘောပေါက်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အားလုံးတောင့်တနေကြ
တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြန်ဆုံးရလိုကြတယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါ။ "နွားကွဲရင်တော့ ကျားက အဆင်သင့် ဆွဲဖို့ စောင့်နေလေရဲ့ ။"
may htaik said...
To Kyaw: "ဗုဒ္မဘာသာမှာ ဘာလို့အရုပ်တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုထုပီး
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ကိုးကွယ်နေသလဲလို့ မေးလို့ရတယ် (ကန်တော့ပါ...စော်ကားလိုစိတ်လုံးဝမရှိပါ...အဖြေပေးစရာလဲမလိုပါ...ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရောက်အောင် ဥပမာတခုပေးခြင်းပါ)"
I just scan the whole post n comments. n this part of ur commnet caught my eyes.
Let me ask you something personal before I go on:
have you ever kept the fotos of your parents?
if so, why u keep it?
do u like if I took ur parents' fotos n step on them?
do u like if i insult u4keeping ur parents' fotos and showing respect to those liveless fotos?
the nature of keeping ur parents fotos is nearly identical with why buddhists pay respects to the images of buddha.
they know this is just an image, it can be made of wood or brass or iron or whatever. but it is an image of buddha.
they aren't not paying homage to these materials but to the essence of Dhamma and the founder of Dhamma behind those idols in order to show their thankfulness to Buddha.
buddhists use the idols of buddha asasymbol to remind all the good ways Buddha taught them how to beagood human at this present life and coming. (it's just like looking at your parents' fotos when u remember how they brought u up to beagood man after their death.)
if u wrongly assume that buddhists are brainless becuase they pay respect to idols only, u r just incredibly ignorant.
if u r thoughtful enough, u should use another example like why muslims pay respect to that back huge stone at Mecca.
ကျွန်တော်က သိလို့ တတ်လို့ ၀င်ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာက လွဲနေကြလို့ သိသလောက် ၀င်ပြောကြည့်တာပါ။ အခု ပြောနေကြတာက ဘာသာရေး အကြောင်း မဟုတ်ပဲ လူတွေ အကြောင်း ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီတော့ ပထမ ဘာသာရေးအကြောင်း စပြောကြည့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ အထဲမှာ အဓိက က မေတ္တာတရားပါ။လူသား အားလုံးကို မေတ္တာထားရပါမယ်။
မိုဟာမက်ဟောခဲ့တဲ့ အထဲမှာ အဓိက က သူ့အယူဝါဒ ပြန့်ပွါးရေးပါ။ သူ့အယူဝါဒ ပြန့်ပွါးဖို့ ဘယ်နည်းလမ်း မဆို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေက သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ လမ်းကြောင်းတွေပါ။
ကောင်းပြီ။သူတို့ နောက်လိုက်(သူတို့ ဘာသာဝင်)တွေ ကို ကြည့်ရအောင်။
လူဆိုတာ ကောင်းတဲ့လူ ရှိသလို ဆိုးတဲ့လူလည်း ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တွက်ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့လူများတယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်သလို၊ ဆိုးတဲ့လူများရင်လည်း ဆိုးတယ်လို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အချက်လေးတွေနဲ့ ပြပါမယ်။
(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးတွေက ဘယ်တော့ မှ သူများတွေကို မဆွဲဆောင်၊မသိမ်းသွင်းပါဘူး။အစ္စလာမ်လူမျိုးတွေကတော့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွဲဆောင်၊သိမ်းသွင်း၊အကြပ်ကိုင်၊ခြိမ်းခြောက် ကြပါတယ်။(၂)ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးအများစုက သူများအသက်ကို ကိုယ်တိုင်မသတ်၊မတိုက်တွန်း၊မချီးမွန်း၊စိတ်မတူပါဘူး။အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အားလုံးက သူများအသက်ကို ကိုယ်တိုင်သတ်၊သတ်ဖို့ တိုက်တွန်း၊သတ်တာကို ချီးမွမ်း၊စိတ်တူသဘောတူရှိပါတယ်။(၃)ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးနီးပါးက မိန်းမ တစ်ယောက်ထက်ပို ယူတာကို လက်မခံကြပါဘူး။အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အားလုံးက မိန်းမ(၄)ယောက် တရားဝင်ယူခွင့်ကို လက်ခံကြပါတယ်။ကျွန်တော် ဒီသုံးချက်ကိုပဲ ပြောပြပါမယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက် ရှိကြပါတယ်။ လူမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင် ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ သူတပါးကိုမှ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့နောက်တော့ ဒီလူလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ဘယ်လိုမှ မှန်ကန်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်ပြောတာကို မကြေလည်ရင်၊ဆွေးနွေးချင်ရင် ဒီမေးလ် ကို ပို့နိုင်ပါတယ်။
အတွေးအခေါ် မမှန်တဲ့၊အထူးသဖြင့် သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်တဲ့ အယူဝါဒမှန်သမျှ မြန်မာ့ မြေပေါ်ကသာမက ကမ္ဘာပေါ်ကပါ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းကြပါစို့။ ။
အဓိကသတိပေးခြင်တာက ပိာုCANADA မှာနေတယ်ဆိုတဲ့ ခွေးသူတောင်းစား တောသား မင်းဖေမင်းပြန်ဆဲ..ငါလိုးမသားခွေးဘုရား (ဆောရီး ခွေးကုလား)
NEအခု ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲလို့ 
စဉ်းစားကြရမယ် အဲဒီ အသိနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
မြန်မာတွေ စည်းလုံးမှ ဖြစ်မှာပါ
အခြေခံ အနေနဲ့ကုလားဆိုင်တွေ ကို
ဈေးဝယ် အားမပေးကြပါနဲ့..ဖြစ်နိုင်ရင် မဆက်ဆံ ကြပါနဲ့။။။။လက်လှမ်းမှီသလောက်
အသိပညာပေးကြပါ ။။ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ
မြွေပွေးကို ခါးပိုက်ထဲ ရောက်နေတာကို
သဘောထားကြီးစွာ လက်ပိုက်ကြည့် မနေကြ ပါနဲ့ ။။ဘာသာ သာသနာ ....တည်မြဲ ရေး အတွက် လှုံ့ဆော်ကြ ပါ။
နောက်တခု ကျွန်တော် အားမရတာက
စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဒဘာသာကို နိုင်ငံတော် ဘာသာအဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ် ပေးပီး ....အခွ င့်အရေးမရတာပါ
သခင်နု လက်ထက်တုံးကလို ပြတ်ပြတ်
သားသား နိုင်ငံတော်ဘာသာ သတ်မှတ်စေချင်တာပါဘဲ ။။နောက်တခုက
( မျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက် စရာ)ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရှိပါတယ် ရှာဖွေစုဆောင်းပီး
မြန်မာတိုင်း သိအောင် ဖြန့် ဝေပေးကြ ပါ။ဒါမှ အင်တာနက်မသုံးနိုင်တဲ့ သူတွေ ရော
သိမှာမို့ လို့ ပါ .....ကျွန်တော် ရွေဘိုသားပါ
ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ရင် လိုအပ်တဲ့ အကူ အညီပြောပါကြပါ..တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါမယ် ။
ခုပေးထားတဲ့ လင့်က မြန်မာမျိုးချစ်တို့ ရေ
ခွေးကုလားတယောက် ကျော်ကျော်ဦးရဲ့ 
လင့် ပါ ။။အဲဒီမှာ စောက်ကုလားတွေရဲ့ 
လိမ်လည်ဖျားယောင်းမှုတွေ တွေ့ ရပါလိမ်မယ် ။ အမြန် ဆုံး ဆုံးမပေးကြပါလို့ 
ဒီလင့် ကတော့ စောက် ကုလားတွေ မြန်မာပြည်ကို ၀ါဒဖြန့် လှုံ့ ဆော်ဖို့လုပ်ထားတဲ့လင့် ပါ ။။။ဗမာတွေ သူတို့ ကို ဆန့် ကျင်ကြပါ ။
ငြိမ်နေကြရင် တော့ သူတို့ တွေ အားကောင်းလာရင် ခံသွားရ မယ်နော်
အမေရိကန်မှာ လူဖြူ ဂိုဏ်းဆိုတာ ခုအချိန် ထိ၇ှိတယ် လူမည်းတွေကို လစ်ရင်လစ် သလို
သတ်တယ် ။။အကြမ်းဖက် သမားဆိုပီး မြို့ လည်ခေါင်မှာတွေ့ နေရတယ်...။အစိုးရကလဲ ဖမ်းမနိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်..။ မဟုတ်ဘူး အဲဒါ
အစိုးရက ဖွဲ့ ထားတာ ..။။လူမဲ နှိမ်နှင်းရေးကို တဖက်က လုပ်နေတာ။
အဲဒီတော့ မျိုး ချစ်ဗမာတို့ ရေ
ကုလားနှိမ်နှင်းရေး ဂိုဏ်းတခုတော့ လှို့ ဝှက်စွာ ဖွဲ့ စည်း ရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပေးချင်တယ် ။လူတွေကိုနှိပ်စက်ရတာ
ဘာသာတရားနဲံ့ တော့ မညီ ဘူးပေါ့ ဗျာ
ဒါမေမယ့်ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် ကုလားတွေ လက်ဦးတော့မယ် ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကာကွယ် ကြရတော့မယ် ။ဗမာဂိုဏ်းကို
မျိုးချစ် အစိုးရ တခု့ နဲ့ ဖွဲစည်း ချင်တယ်။ပီးတော့ စောက်ကုလားတွေကို
လစ်ရင် လစ်သလို သတ်ကြရမယ်။။သတ်ဖို့အဆင်မပြေရင်
စောက် ကုလားတွေရဲ့လီးတွေကို
အရင်.း ကနေ ဖြတ်ကြရမယ်။ဒါမှ မျိုးမပွါးနိုင်မှာ ။မဟုတ်ရင် ဗမာမတွေ ကုလားလီးနဲ့ လိုးတာ ခံကြရမှာစိုးလို့ ပါ။
နဲနဲတော့ အကြမ်းဖက်ဆန်တဲ့အစီ အစဉ်ပါ
ဒါပေမယ့်နိုင်ငံ ကြီးတွေ မှာ အစိုးရတွေ ရဲ့ လှို့ ဝှက်ဖွဲ့ ထာတဲ့ပရိုဂရမ်မျိုးပါ ။ ဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာ
လူမျိုးတွေ အတွက် ဘာဘဲ လုပ်လုပ်ရလုပ်၇ ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်။ သဘောတူပါသလာ။
သဘောကောင်းနေရင်တော့ ခင်းဗျားတို့ ရဲ့မျိုး ဆက်တွေ ကုလားလိုးပီး ခင်များတို့ လည်ပင်းကို
ကုလားတွေ က ဟာလာ လုပ် ဖြတ်ကြမှာ စိုးလို့ ပြောနေတာ ။
ကဗျာလေးကို မှတ်ထားကြနော် ဘော်ဘော်တို့မျိုးကန်းကုလားမတွေနဲ့ကိုရမ်ဘာသာပြန် ဖာသယ်မ လှလှဝင်းရဲ့အကြောင်းကို လက်တန်းစပ်ထားတဲ့ ကဗျာ :P :P :P
ဟာရကေး ..ကုလားမလေးမှာကွယ် အာရပ်တွေလိုးတာခံခဲ့ရလို့ခုများတော့မူဆလိမ်ပါ အချစ်ပိုတယ်ဆိုပီး ဒစ်လျှိုတာ တနေ့ငါးကြိမ်မိ့ုအမယ်မင်း ကုလားမျိုးကန်းပါပေါ့ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကွဲ လှလှဝင်း လိုဘဲ.။(မှတ်တမ်း-ကဗျာ)
ငါလိုးမသါးဇော်မျိုး မင်းအမေမင်းလိုး သေချင်းဆိုး
မင်းစောက်ဆင့် နဲ့ ဖင်ခံဘို့ မကြိုးစားနဲ့ 
မင်းညီမဘဲခံပါစေ ငါတော့ မလိုးဘူး ကပ်ပလီကိုဘဲအားကိုးတော့ 
(၃)ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးနီးပါးက မိန်းမတစ်ယောက်ထက်ပို ယူတာကို လက်မခံကြပါဘူး
အချောင်လိုက်နိုက်နေတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမပြောကြပါဘူး အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အားလုံးကမိန်းမ(၄)ယောက် တရားဝင်ယူခွင့်ကို လက်ခံကြပါတယ်။ဒါမှလည်းမဒိန်းမှု အချောင်နိုက်မှု မဖြစ်တော့ ဘူးပေါ့မင်းတို့အချောင်နိုက်ဝါဒကို အားပေးနေတာဘဲ ကံငါးပါးကစာအုပ်ထဲမှာဘဲရှိတယ်
To.....kyaw ဆိုတဲ့နှမလိုး စောက်ရူး.........ဒီမှာမင်းရေးထားတာပြန်ဖတ်..
မသေမချင်းမှတ်ထား......လူမျိုးလို့ မပြောနဲ့ .....
မင်းကဦးနှောက်မရှိ ဒေါ်စုနဲ့ လာလွှဲချနေသေးတယ်။မင်းမှာဦးနှောက်ရှိရင် မင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။
မှတ်ချက်(ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါ)ဒါပေမဲ့ဒီလိုမွတ်ဆလင်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ ဒေဝဒတ်တွေကိုတော့ ဆဲတတ်ပါတယ်
ဒီနှမလိုးkyawဆိုတဲ့ကောင်က ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပေါင်းပြီး ကုလားစိတ်ပေါက်နေပါတယ်....နှိပ်ကွပ်ကြပါ......ဒီဘလော့ဂါကို အမြဲအားပေးနေပါတယ်...
လီးဗုဒ္ဓဘာသာလီးဂေါတမလီးဘုန်ကြီးတွေမအေးလိုးဂေါတမကုလားစုပ်ချီးပုံရွှေးတကုန်နဲ့ဆုလေးဆိုတဲ့ကုလားချီးပုံကိုကိုယ်ကွယ်နေဖာသယ်မနဲ့ဝ၇မ်းပြေနဲ့လိုးမွေးတဲ့ဗမာ့ကိုယ်နှမကိုယ်လိုးတဲ့ဗမာ့တွေသေဖိုပြင်ထာကျသင်္ကြန်မှာဗုံပေါက်ပြီးသေထာနည်းတောင်နည်းသေးတဲ့...... bobo ဆိုတဲ့ဖာသယ်မသာမင်းတို့အာလုံးကိုဂေါတမလီးနဲ့လိုးလိုးသတ်မယ်သတိထာနေး.........
blood empire said...
မြန်မာတွေရောအခြားဘာသာဝင်တွေရောသိပ်မဆဲကြပါနဲ့ဗျာ ကြားရတာမကောင်းတော့ဘူး ဘာသာတိုင်းမှာအပြစ်အနာအဆာကတော့ရှာရင်ရှိမှာပဲလေ
ဒါကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တောင်မှ ဒေ၀
ကြောင်းအရာတွေကိုအခုခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကဟောခဲ့တယ်ဆိုတာလဲအားလုံးသိလောက်ပါတယ်နော် ခေတ်ပညာတတ်လို့ပဲအင်တာနက်သုံးနေကြတာလေအပေါ်မှာရေးထားတာတွေထဲမှာသေချာပြန်ဖတ်ရင်ဘယသာရေးဆွေးနွေးတာကနေနိုင်ငံရေးဘက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ထင်တယ် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိူးလုပ်တာကပွဲလန့်နေတုန်းဖျာဝင်ခင်းနေသလိုပဲနော် ဘာသာရေးအတွက်
သလေးတွေလျော့ဖို့ပြောချင်ပါတယ် ဘူရားရှင်ဟောကြားခဲ့သလိုပဲ သည်းခံခြင်းဟာရန်အပေါင်းကိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်
ချင်ရင်တော့ ကျွန်တော့်လိပ်စာက thurapyanchi@gmail.com ပါ
ဟားဟားဟား လို့ရယ်ရင် မျက်ခွက်
ဗျ ဒေဝဒတ်မြေမြိုတဲ့ ဂေါတမမေတ္တာ
မျိုးလား ဟဲ ဟဲ
ကိုမေကိုပြန်လိုးတဲ့ ကလားတွေ လီးပဲ မျိုးကိုက အမျိုးယုတ် ကလားမျိုး
ဘာသာ အတွက် ရန်ဖြစ်သည် သတ်သည် ဆဲသည် ဆို သည်မှာ မိမိ ကိုးကွယ် ရာဘာသာကို ဖြတ်လို့ ဖြတ်စီ လုပ်ခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ကြအောင်လုပ်ခြင်းသာဖြစ်လေသည်။
အကြောက်တ၇ားမှ လာခြင်းသာဖြစ်လေ၏။ အမှန်တကယ်မိမိဘာသာကို နားလည်ယုံကြည်သူသည် သူတပါးကဲ့ရဲ့မှူ့ ကိုခံယူနိုင်လေ၏။
ဘာသာတရား ဆိုသည်မှ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူကို ငြိမ်းချမ်းမှူ ကိုသာဖြစ်စေရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သည် buddhism တစ်ဦးဖြစ်သည်၊
ြMuslim တစ်ဦး ဆိုလည်းမမှားပါ၊ Christian တစ်ဦးဆို လျှင်လည်း မှန်ပါသည်။ ဘာသာအားလုံး အထူးသဖြင့် လူသားအားလုံးကိုလေးစားပါသည်။ အယူဝါဒ အတွက် လူမသတ်လိုပါ။ အတင်းယုံကြည်ခိုင်းလျှင်လည်း ယုံကြည်ပေးပါမည်။
လူသည် တွေးခေါ်တတ်သော သတ္တ၀ါဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ ကြီးသည် ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဦးလူသားများအတွက် မိုးကြိုးပြစ်ခြင်း၊ လျှပ်စီးလျှပ်ခြင်းများသည် တန်ခိုးရှင်တစ်ဦးဦး (၀ါ) ဘုရားသခင် ဒေါသထွက်ခြင်းဟုယုံကြည်ကြပါသည်။
There is no miracle if you know the reason why.
ဘာသာတရားအတွက် ရန်ဖြစ်သူများသည် ၄င်းဘာသာ တရား နှင့်မထိုက်တန်သူများဖြစ်လေ၏။
မတူရင် ရန်မဖြစ်ပါ၊ မပြိုင်ပါ။
တူ၍သာ မတိမ်းမယိမ်းမို့ သာ ရန်ဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်လေ၏။
နောက်ထပ်ဘာသာတရားအသစ်များပေါ်ထွက်လာပါသည်။ အရင်ဘာသာဝင်များ အကြောက်အကန် တိုက်ခိုက်ကြပါသည်။ နောက်ထပ်လည်းဘာသာတရားများ ပေါ်ထွက်လာဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားသည်တနေ့ တွင်မိမိကိုယ်ကို လေးစားယုံကြည်မှူ မိမိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စေတနာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှူ ၊ ဘ၀ တွင် မည်သည့် အရာကို တန်ဖိုးထား၍ မည်သည် အရာကို ရှောင်ကျဉ် ရမည် စောင့်ထိန်းရမည့်တို့ ကို နားလည် သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မည်။
စိတ်နှစ်လုံးချမ်းမြေ့မှူ ရကြ၍ မိမိနှင့်ယုံကြည်မှူ ၀ါ နားလည်မှူ မတူသူ တို့ ကို မေတ္တာ ထားနိုင်ကြပါစေ။
လီးဘဲဟေ့ fuck you ,mother fuck and sister fuck..
အဓိကသတိပေးခြင်တာက ပိာုCANADA မှာနေတယ်ဆိုတဲ့ ခွေးသူတောင်းစား တောသား မင်းဖေမင်းပြန်ဆဲ..ငါလိုးမသားခွေးဘုရား (ဆောရီး ရုပ်ထုကို ကိုကွယ်တဲ့ကောင်းတွေ)
ဟို canda မှာနေတဲ့.ခွေးမသာ.မင်းသတ္တိရှီရင်
လာခဲ့ အချိန်မရွေဘဲ..မင်းတို ဗမာတွေက
မြန်မာနိုင်ငံက 2012 မှာ ဗာနိုင်ငံဖြစ်တောမှာ..
ဗာမများထဲမှာ မင်းအမေ သို့မဟုတ်..မင်းညီမ/အမ/မင်းသမိ ပါဝင်ကောင်ပါဝင်းပါလိမ္မည်..နော်..
ဇော်မျိုး (ပေါင်နှစ်လုံးကြားက ကောင်)
ဘာလို့ ဖုံကြီးကို ဘိုဘိုလို့ခေါ်ပြီးမနက်ကြရင်.ဖင်ခံ ညကြရင်.ကန်တော့
မင်းတို့ ဗမာတွေ အင်္ဂလိပ်ကို အဖေ ခေါ်ခဲ့တယ်.နော်..
အင်္ဂလိပ်က မင်းတို့ ဘုရင်ဖင်ကိုချခဲ့တယ်..ဟုတ်လာ..
နောက် မင်းဘုရာ သုံးတောင် ချီးပုံးပံစံနဲ့..
မင်းတို့ဘုရာအရှေမှာ ထမင်းတွေကိုထာ ကြတယ်.. ဘယ်သူစာ လဲ.ဘယ်သူမှမစာဘူ..
မင်းတို့ဘုရာမှ စာလို့မတတ် အရုပ်ကို ဘုရာထင်..
ညီမကို ဖာမထင် ပြီး လိုကြတဲ့မင်းတို့ဗမာ..
မင်းတို့ ဗမာ ဖာမတွေအများကြီးရှီတယ်.အဲဒါမင်သိလာ..
မင်းတို့ပြောတဲ့.ဗုဒ္ဓ မင်းတို့ကို မစုံးမဘူလာ..
မိန်မ အပျိုးတွေ ညကြရင်..club မှာ ..
မေးတော့ ညိမ်းချင်တဲ့ ဗုဒ္ဓ လီဘဲ..
မင်းတို့ ဗမာတွေ ပြောနေတဲ့..ဘိုဘို..ဆိုလာ..
ဟေ့..ခွေးမသာ ဗမာ..တွေကိုမင်းတို့ကို တစ်ခုပြောပြမယ်..မှတ်ထာ..ဖုံကြီး ရဲ့..လိတောင်ချင်..ဲ(ကဗျာ)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရွာတရွာမှာ ဖုံကြီးတယောက်ရှီတယ်..
တနေ့မှာ ဖုံးကြီးက စိတ်ကူနေတယ်..
ဘာဖြစ်လို့ ငါ့မိန်မ ဒီနေ့မလာပါလဲ..
မိန်မလေ..တွေ ရေးချိုးနေတာကို မြန်တော့..
ဟ ငါ့မိန်မ ဒီနေ့လာခဲ့ရင်...ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ..
ကြောင်းလေ..ခများ အကောင်းကလဲကြီး ဖင်ကလဲ..ကြယ်သွားတယ်..
ကောင်းမလေ..တစ်ယောက် က ဘိုဘိုရှီလာ..
ဖုံကြီး အဲဒီကောင်မလေ.ကို ချပြီး ကြီုးနဲ့ဖန်ချီးထာတယ်..
နောက် မြေအောက်မှာ ထည့်ထာ..
မေးတော့..သူတို့ဖုံးကြီးတွေက ဘုရာရဲ့ သားတော်တဲ့..ဟဟဟခွေးမသားတွေ မျိုးရုပ်တွေ..အဲဒါလာ..မင်းတို့ဗမာ..
မိန်မတစ်ရောက်ဆိုရှုင်..စစ်သား 49 လောက်ကချတယ်..
မှတ်ထာ... လူသားချင် ဆို လွတ်ထာတယ်..မှတ်..
ဖာနိုင်းငံက ဖာမသားတွေ မင်းတို့မှတ်ထာ နော်..
မင်းတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရာ ဘုန်းကြီး
ဟာ တကာမ တွေ ကိုမြင်ရင်..
အိမ်းသာ ထဲမှာနေ့တိုင်း လီးထု တယ်..
ငါနဲ့ ဆိုရင် လီထုပြိုင်ဘက်ဘဲ...
မင်းတို့ အတွက် သီချင်တပုဒ်..
မနက် အိပ်ရာထ မိုးမလင် ခွက်တစ်လုံးကိုင်
မင်း ဥိးချနေတဲ့ သင်ကန်း ပိတ်စ
မင်းအမေ ရာသီးလာတုံးက ဝတ်ထာတဲ့
အပိုင် အစ နဲ့ အလာတူဘဲ..
စော်စော်ထ စွန်းချက် စွန်းချက်
စွန်းမလောက် ခွတ်ကိုင် ရွာဝင်
သူတောင်စားရဲ့ မထင်းအိုကိုခွဲ ..
အဲဒါမှ ဗုဒ္ဓ ဝါသ မင်္ဂလာတွေ..
လူမိုက်တွေကို မွှေး ဟေ့.ဗုဒ္ဓ..ဗုဒ္ဓ..ဗုဒ္ဓ..
တကားမ တွေကို လမ်းမှတွေလို့
ထမိန် ခွတ်ပြီး လိုလိုက်မယ်...
ကန်တော့ပွဲ ကို ရှေ့မှာ ချလို့..
အဲဒါမှ ဘုန်းကြီး အလင်္ကာ တွေ..
အာလုံး ကြားကြား သမျှ တစ်သောင်း တစ်သောင်း ဘုန်းကြီး အိပ်ကပ်ထဲ့တို့ပြည့်ပါစေ..
အဲဒီမှ မင်းတို့..ဘမာလေကို.. ငါ့ချနေတယ်..
မင်းတို့ ရုပ်ရှင်း မင်သ္မီး 400000 ပေးရင်..ကောင်းကောင်းချလို့ရတယ်..နော်..
အီရန်မှာ professor တယောက် မူဆလင်ဘာသာကိုဆန်းစစ်ဖို့ပြောတာကိုသေဒဏ်ပေးတယ်ဗျာ.......ကျွန်တော်ကတော့သဘောမကျဘူး....ဘာလို့ဆန်းစစ်လို့မရတာလဲ...လူဆိုတာကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုစဉ်းစားရမှာလေ...တနေ့ငါးကြီမ်ဝတ်ပြုတာကကောလိုအပ်လို့လားဗျ....နောက်တခုက ဘာလို့ များသောအားဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားတွေက မူဆလင်တွေဖြစ်နေရတာလဲဗျာ......နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်
မယ်...မူဆလင်တွေချည်းပဲ...ကျွန်တော့ဆီမှာအထောက်အထားတွေရှိတယ်....ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလာတာ....Bangladesh ကပိုဖြစ်တာမများဘူးလားဗျာ...Tsunami မှာအထိများတာကကော.....ဘယ်နိုင်ငံလဲဗျာ..စဥ်းစား
ကြပါ.............အင်ဒိုနီးရှားဟာ အရင်က ဗုဒ်ဓဘာသာနိုင်ငံပါ......အာရပ်တွေ..India ကမူဆလင်ကုန်သည်တွေကကုန်ကူးတယ်..ပြီးတော့အခြေချတယ်....အင်ဒို ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်မိန်းမတွေကိုယူတယ်...ကလေးများများမွေးတယ်....လူများလာရင်ပုန်ကန်တယ်....Sultan ခေါ် ဘုရင်ငယ်လေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်...အဲ့ဒီနယ်မှာရှိတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာတွေကို ဘာသာအတင်းပြောင်းခိုင်းတယ်.....ပြီးရင် တကယ့် အင်ပါယာကြီးကိုတိုက်ယူသွားတယ်.....အဲ့ဒီလိုနဲ့သိမ်း
kyaw zay said...
ဟေ့ကောင်ခွေး မင်းဖင်ကို ငါလာချမယ်..ကွ
မင်းကတော့ 20 ပေးမယ်..ကွ
ဒေါလာ နဲ့ မင်းဖင်ကိုချမယ်
ဟေ့ကောင် မင်းဖင်ကို မင်းပြန်ချလိုက်ကွ....လီဘဲ...
မင်း ဆိုဒ်ကို မလာတောင်ကြားပြီးဆိုလို့
လီစုပ်မလာ.. မင်းတို့ ဘုရာ မင်းတို့ ဖင်ကို ချနေတယ်..
မင်းတို့ ဗမာ ရုပ်ရှင် ရိုက်တဲ့ ကောင်တွေ
မင်းတို့လဲ သိကြမှာပေါ့.. ဖင်းလိုဖင်ခံတွေဘဲနော့်..
အွန်လိူင်မှာ စောက်ပက လီထည့်မယ့်နေရာတောင်မရှီဘူ...ဘယ်ကောင်တွေ
နောက်ဆုံးပြောမယ်.. မင်းညီကို တောင် ငါပိုက်ဆံ ပေးပြီးတော့ ချပြီးပြီး..
iam wai yan minn toe pyaw nay tar ka i toe muslim touy bar mha ma phit boo min toe pae phit mhar i toe ka mhan kan nay tal mhar nay tar ka min toe
i pyaw pya mal ga bar ko sa kae tar bae thu lae thi lar? min toe ko phan sin tar ka ba thu lae thi lar?ayy bal thi ma lae min toe ka stone touy ko belief nay tar ko min toe mhar ka pagoda ka myar tal lay i toe mhar ka 1 par telashin ko belife tardlout so min ta bow pout kaww pot myar tour yin tot sorry